အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ – laws | Kyaw Zaw Oo's Blog
March 9, 2019 October 22, 2019 kyaw zaw oo
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၃။)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၇ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ၄ ရက်)
အမည်၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေအရ အောက်ဖော်ပြပါ အကြမ်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်သူ၊ ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်သူ၊ အားပေး ကူညီသူ၊ လှုံ့ဆော်သူ သို့မဟုတ် ကြံရာပါအဖြစ် ဆောင်ရွက်သူများအပေါ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည် –
(က) မည်သူမဆို နိုင်ငံတော်အတွင်း ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှု၊
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံသားကဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်တွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရသည့် နိုင်ငံခြားသားကဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့ တစ်ဦးဦးအပေါ်တွင်ဖြစ်စေ ပြည်ပတွင် ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှု၊
(ဂ) အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ၊ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ၊ အများပြည်သူ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အတွက် အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေရန် ပြုလုပ်မှုများ၊
(ဃ) အကြမ်းဖက်မှုကို ကျူးလွန်သော သို့မဟုတ် ကျူးလွန်မည်ဖြစ်သော အကြမ်းဖက်သမား တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ အားပေးကူညီရာရောက်သော ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု၊
(င) ပြည်ပရှိ နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ သံရုံးနှင့် ကောင်စစ်ဝန်ရုံး အပါအဝင် သံတမန်ဆိုင်ရာ ရုံးများကို လည်းကောင်း ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှု၊
(စ) တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ နိုင်ငံတော်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားသော ရေယာဉ်၊ လေယာဉ်နှင့် အခြားစက်တပ်ယာဉ်တစ်ခုခုပေါ်တွင် ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှု၊
(ဆ) ပြည်တွင်းမှဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှဖြစ်စေ ပြေးဆွဲသော သို့မဟုတ် ငှားရမ်းထားသော ရေယာဉ် သို့မဟုတ် လေယာဉ်နှင့် အခြားစက်တပ်ယာဉ်တစ်ခုခုပေါ်တွင် အမှုထမ်းပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရသော နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် ယင်းတို့ပိုင်အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့က ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှု ၊
(ဇ) နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေသော အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခြင်းခံရသူအား သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ပနိုင်ငံသို့ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို ခွင့်မပြုသည့်အခါ ထိုသူက ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှု၊
(ဈ) နိုင်ငံတော်အတွင်း အခြေပြု၍ နိုင်ငံတော်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ အခြားနိုင်ငံများ ကိုသော် လည်းကောင်း ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ၊
(ည) နိုင်ငံတော်၏ မြေပြင်၊ ရေပြင်၊ လေပြင်၊ ပိုင်နက် နယ်မြေနှင့် ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းတို့တွင် ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ၊
(ဋ) နိုင်ငံတော်၏ နေရာတစ်ခုခုမှ ပိုင်နက်ပင်လယ်ပြင်ပကို ဖြတ်သန်း၍ နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ အခြားနေရာတစ်ခုသို့ သွားလာသော သို့မဟုတ် ခရီးစဉ်အတိုင်း ခုတ်မောင်းသွားလာသော ရေယာဉ်များက ဖြစ်စေ၊ ထိုရေယာဉ်များကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ် ပြင်ပ၌ နိုင်ငံတော်နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ကပ်လျက်ရှိသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ နယ်နိမိတ်မျဉ်းနှင့် ကပ်လျက်ဖြတ် သန်းသွားလာသော ရေယာဉ်ကဖြစ်စေ၊ ထိုရေယာဉ်များကိုဖြစ်စေ ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှု။
၃။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်-
(ခ) အကြမ်းဖက်မှုဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်မှုနှင့် ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်မှုများကို ဆိုသည်-
(၁) အခန်း (၄) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော မြို့ပြလေကြောင်းပျံသန်းရေးနှင့် လေဆိပ်တို့ကို ဥပဒေနှင့် မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှု၊
(၂) အခန်း(၅) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပေးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျူးလွန်သည့် ပြုလုပ်မှု၊
(၃) အခန်း (၆) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျူးလွန် သည့် ပြုလုပ်မှု၊
(၄) အခန်း (၇) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယို သတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် နျူကလီးယားအဆောက်အအုံများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှု၊
(၅) အခန်း (၈) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှု၊
(၆) အခန်း (၉) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းတွင် ရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေး အဆောက်အအုံကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှု၊
(၇) အခန်း(၁၀) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော အမှတ်အသားပြုလုပ်မထားသည့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထု ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှု၊
(၈) အခန်း(၁၁) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှု၊
(၉) အခန်း (၁၂) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုနှင့် သက်ဆိုင် သည့် ပြစ်မှု၊
(၁၀) အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ၊ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ၊ အများပြည်သူ သို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံပိုင် အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုဖြစ်စေ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေရန် ပြုလုပ်မှုများ၊
(၁၁) ပြည်ပရှိနိုင်ငံတော်ပိုင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင် အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်း ကိရိယာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ သံရုံးနှင့် ကောင်စစ် ဝန်ရုံးအပါအဝင် သံတမန်ဆိုင်ရာရုံးများကိုလည်းကောင်း ကျူးလွန်သည့် အကြမ်းဖက်မှု၊
(၁၂) အကြမ်းဖက်သမားကိုဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်ကိုဖြစ်စေ လက်နက်နှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော လက်နက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးရန်၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့ရန်၊ လက်ခံထိန်းသိမ်းပေးရန်၊ ထောက်ပံ့ရန် သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ရန် ကမ်းလှမ်းသည့် ပြုလုပ်မှုများ၊
(၁၃) အများပြည်သူအတွင်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အစိုးရ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအား ဥပဒေနှင့်မညီသည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုကို အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်စေခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြုလုပ်ရမည်ကို မပြုလုပ်ဘဲ ရှောင်ရှားစေခြင်းတို့ကို ရည်ရွယ်၍ အရပ်သားကိုဖြစ်စေ၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲဖြစ်နေသည့် အခြေအနေတွင် စစ်ပြိုင်မှု၌ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိသည့် အခြားသူတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ သေစေရန် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် နာကျင်စေရန်နှင့် အခြားပြုလုပ်မှုများ၊
(၁၄) အကြမ်းဖက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အများပြည်သူ၏ ကျန်းမာရေးကိုဖြစ်စေ၊ ဘေးကင်းရေးကို ဖြစ်စေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြစ်စေ ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေသည့် အကြမ်းဖက်မှုများ၊
(၁၅) အကြမ်းဖက်အုပ်စု တစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖြစ်စေ သူတစ်ဦးဦးအား ပါဝင်စေရန် တိုက်တွန်းမှု၊ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှု၊ ဝါဒဖြန့်မှု၊ စုဆောင်းရန် ပြုလုပ်မှုများ၊
(၁၆) အကြမ်းဖက်အုပ်စု ဖွဲ့စည်းရန်၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုတွင် သိလျက်နှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ တာဝန်ပေး၍ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်စေရန် ပြုလုပ်မှုများ၊
(၁၇) အကြမ်းဖက်သမားကိုဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်ကိုဖြစ်စေ ဖမ်းဆီး၍ အရေး ယူခြင်းမပြုနိုင်စေရန် သို့မဟုတ် လွတ်မြောက်စေရန်အလို့ငှာ ထိမ်ချန်ခြင်း သို့မဟုတ်သိလျက်နှင့် ခိုလှုံခွင့်ပေးခြင်း၊ ပုန်းအောင်းခွင့်ပေးခြင်း၊ ယာယီတည်းခိုနေထိုင်ခွင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဝှက်ထားခြင်း ပြုလုပ်မှုများ၊
(၁၈) အကြမ်းဖက်သမားကိုဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်ကိုဖြစ်စေ အဆောက်အအုံနှင့် နေရာတစ်ခုခုကို အသုံးပြုခွင့်၊ စုဝေးခွင့်၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခွင့်ပေးရန်၊ အကြမ်းဖက်မှုဆိုင် ရာလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရန် သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြုလုပ်မှုများ။
(ဂ) ရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေးအဆောက်အအုံ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်၏ ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း တွင် ရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေး သို့မဟုတ် ထုတ်ယူအသုံးပြုရေး အတွက်ဖြစ်စေ၊ အခြား စီးပွားရေးအတွက်ဖြစ်စေ ရည်ရွယ်၍ ပင်လယ်ကြမ်းပြင် တွင် အခိုင်အမာတပ်ဆင် ဆောက်လုပ်ထားသော ဖန်တီးထားသည့် ကျွန်း သို့မဟုတ် နေရာ အဆောက်အအုံကို ဆိုသည်။
(ဃ) အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များ၊ အကြမ်းဖက်မှုတစ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟု ယူဆရသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ၊ အကြမ်း ဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက် အုပ်စုတစ်ခုက အသုံးပြုခဲ့သည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟု ယူဆရ သည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ၊ အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်စု သို့မဟုတ် အဆိုပါအုပ်စု၏ ကိုယ်စား အခြားသူတစ်ဦးဦးက ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုအား ထောက်ပံ့ရန် သို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှု တစ်ခုအားရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စုဆောင်းခဲ့သည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့် အဆိုပါငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများမှ ဆင့်ပွားဆင်းသက်လာသည့် ငွေကြေးနှင့် အကျိုးအမြတ်များကို ဆိုသည်။
(င) လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန် ဆိုသည်မှာ မြေပြင်မှ လေယာဉ်မထွက်ခွာမီ အမှုထမ်းများ လေယာဉ် ပျံသန်းရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ချိန်မှစ၍ လေယာဉ် ဆင်းသက်ပြီး ၂၄ နာရီကြာသည်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အချိန်ကာလကိုဆိုသည်။ ယင်းစကား ရပ်တွင် လေယာဉ်ပျံသန်းချိန်တစ်လျှောက်လုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် အချိန်ကာလလည်း ပါဝင်သည်။
(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံများဆိုသည်မှာ အများပြည်သူအကျိုးငှာ အများပြည်သူပိုင်အနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အနေဖြင့်ဖြစ်စေ အသုံးပြုသော ၊ ရယူထားသော၊ ဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ပေးသော သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးပေးသော ရေ၊ မိလ္လာအညစ်အကြေး၊ စွမ်းအင်၊ လောင်စာ၊ ကုန်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ရေကြောင်းလမ်း၊ တံတား၊ လေဆိပ် သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစသည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။
(ဆ) နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်၏ ကိုယ်စားလှယ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥပဒေပြုရေး သို့မဟုတ် တရားစီရင် ရေးအဖွဲ့ ဝင်များ၊ နိုင်ငံတော်၏ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အစိုးရဌာန အချင်းချင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအတွက် ယင်းတို့၏ တရားဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယာယီ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းနေထိုင်သော အဆောက် အအုံ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသော ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတို့ကို ဆိုသည်။
(ဇ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ပြည်ပနိုင်ငံ တစ်ခုခုမှ မည်သည့် အချိန်အခါ၌မဆို ရောက်ရှိနေသည့် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်-
(၁) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံ၏အကြီးအကဲ၊ နိုင်ငံ၏အကြီးအကဲကဲ့သို့ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်၊ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနှင့် သံတမန်များ၊
(၂) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ လိုက်ပါသော ယင်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊
(၃) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ အထူးအကာအကွယ်ရထိုက်ခွင့်ရှိသော သံတမန်ကိုယ်စား လှယ် များ အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ကိုယ်စားလှယ် အရာရှိတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အစိုးရအချင်းချင်း ဖွဲ့စည်း ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အရာရှိ သို့မဟုတ် အခြားကိုယ်စားလှယ်။
(ဈ) ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက် ဆိုသည်မှာ ဇီဝလက်နက်၊ ဓာတုလက်နက်နှင့် နျူကလီးယား လက်နက်တို့ကို ဆိုသည်။
(ည) ဇီဝလက်နက်ဆိုသည်မှာ အောက်ပါပစ္စည်းကိရိယာတစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်-
(၁) ရောဂါမဖြစ်ပွားရန် ကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ အခြားငြိမ်းချမ်းသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်စေ မှန်ကန်ကြောင်း ထင်ရှားပြသမှုမရှိဘဲ မူလ အနေအထား သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းအရ မည်သည့်ပုံသဏ္ဌာန်၊ မည်သည့်အရေ အတွက် မဆို ရှိသည့် အဏုဇီဝပစ္စည်း၊ အခြားဇီဝပစ္စည်းနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းများ၊
(၂) ရန်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်စေ၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများအတွက်ဖြစ်စေ အဆိုပါ အဏုဇီဝပစ္စည်း၊ အခြားဇီဝပစ္စည်း သို့မဟုတ် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းများ အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းပုံစံရေးဆွဲပြုလုပ်ထားသော လက်နက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်သည့် ပစ္စည်းများ။
(ဋ) ဓာတုလက်နက်ဆိုသည်မှာ အောက်ပါအဆိပ်အတောက်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ လက်နက်ပစ္စည်း ကိရိ ယာများ အတူတကွရှိသည်ဖြစ်စေ၊ တစ်သီးတခြားစီရှိသည်ဖြစ်စေ ယင်းဓာတုလက်နက် ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်-
(၁) စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သုတေသန၊ ဆေးဝါးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အခြားငြိမ်းချမ်းစွာ အသုံးချရေး အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အဆိပ်အတောက်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဓာတုလက်နက်များအား တိုက်ရိုက် ကာကွယ်ရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဓာတုအဆိပ်အတောက်ပစ္စည်းများဖြင့် အသုံးပြုမည့် စစ်ရေး ကိစ္စများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းဆူပူအုံကြွမှုများအား နှိမ်နင်းရေးအတွက် သော်လည်း ကောင်း အသုံးပြုရန် မရည်ရွယ်သည့် အဆိပ်အတောက်ဓာတုပစ္စည်းများ၊
(၂) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ အဆိပ်အတောက်ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် လူကို သေစေရန် သို့မဟုတ် ဘေးဥပဒ် ဖြစ်စေရန် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားသည့် လက်နက်ပစ္စည်းများနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ၊
(၃) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) ပါလက်နက်ပစ္စည်းများ ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုရေးအတွက် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားသည့် အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ။
(ဌ) နျူကလီးယားလက်နက်ဆိုသည်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီမှ ပြုစုထားသော နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းများအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးမှု ပဋိညာဉ်စာချုပ် ၁၉၈၀ ပါ အခန်း(၁) ၊ အပိုဒ် ၁ (က) နှင့် (ခ) တွင် ဖွင့်ဆိုထားသည့် နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သော လက်နက်ကိုဆိုသည်။
(ဍ) ပစ္စည်းကိရိယာဆိုသည်မှာ မည်သို့သော နျူကလီးယားပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေသည့် ပစ္စည်းကိုမဆို သို့မဟုတ် ရေဒီယို သတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းကို ပျံ့နှံ့စေသော သို့မဟုတ် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်စေသော ပစ္စည်း၏ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် သေဆုံးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အား ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြီးမားစွာ ပျက်စီးစေခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သော ပစ္စည်းကိုဆိုသည်။
(ဎ) နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ ပလူတိုနီယံ- ၂၃၈ ၊ အိုင်ဆိုတုပ်ပါဝင်မှု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ထက်ပို၍ ပါဝင်သော ပလူတိုနီယံမှ အပဖြစ်သော ၊ ပလူတိုနီယံ၊ ယူရေနီယံ -၂၃၃ ၊ ပါဝင်ကိန်းမြှင့်တင် ထားသော ယူရေနီယံအိုင်ဆိုတုပ် -၂၃၃ သို့မဟုတ် ၂၃၅ ၊ သတ္တုရိုင်း သို့မဟုတ် ကြွင်းကျန်သတ္တုရိုင်း မှအပ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပွားလာသည့် ယူရေနီယံပါဝင်သည့် အိုင်ဆိုတုပ်အရောများ၊ ဖော်ပြပါဒြပ် ပစ္စည်းတစ်မျိုး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပို၍ ပါဝင်သော မည်သည့်ဒြပ်ပစ္စည်းများကို မဆိုဆိုသည်။
(ဏ) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် အလိုအလျောက်ပြိုကွဲခြင်း ဖြစ်နိုင်သော နျူကလီးယပ်များ ပါဝင်သည့် ရေဒီယို သတ္တိကြွအရာဝတ္ထုများ (ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်မကပိုသော အိုင်းယွန်းဖြစ် ဓာတ်ရောင်ခြည်အယ်လဖာ၊ ဘီတာ၊ နယူထရွန် အမှုန်နှင့် ဂမ္မာရောင်ခြည်များ ထွက်ရှိပြီး) နှင့် ၎င်းတို့၏ ရေဒီယိုသတ္တိကြွနိုင်သော သို့မဟုတ် ကွဲထွက် ခြင်းဖြင့် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းသော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် သေစေနိုင်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အား အပြင်းအထန်နာကျင်စေခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြီးမားစွာ ပျက်စီးစေခြင်းဖြစ်စေနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။
(တ) နျူကလီးယားအဆောက်အအုံဟု ဆိုရာတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
(၁) ရေယာဉ်၊ မော်တော်ယာဉ် ၊လေယာဉ် သို့မဟုတ် အာကာသယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးပေါ်တွင် အဆိုပါ ယာဉ်များ ရွေ့လျားနိုင်ရေးအတွက် စွမ်းအင်ပင်ရင်းအဖြစ် အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် အခြား ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် အသုံးချရန် တပ်ဆင်ထားသော နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို အပါအဝင် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၊
(၂) ရေဒီယို သတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ အဆင့်ဆင့်ပြုပြင်စီရင်ခြင်း သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသည့် မည်သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ အဆောက်အအုံကို မဆို သို့မဟုတ် ယာဉ်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို၊
(၃) နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အဆင့်ဆင့်ပြုပြင်စီရင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ကိုင်တွယ် ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ခြင်းပြုသည့် အဆောက်အဦများနှင့် စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ ပူးတွဲပါရှိသည့် အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဆိုသည်။ ယင်းအဆောက်အအုံကို ပျက်စီးစေပါက သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်မှုဖြစ်စေပါက သိသာများပြားသော ပမာဏရှိသည့် ဓာတ်ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် ရေဒီယို သတ္တိကြွ ဒြပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လွှတ်စေနိုင်သည့် အဆောက်အအုံ။
(ထ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ နျူကလီးယားဒြပ် ပစ္စည်းကို မည်သို့သော နည်းလမ်းဖြင့်မဆို စတင်တင်ပို့ရာနိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်ကို ကျော်လွန်၍ ပို့ဆောင်ရန် အလို့ငှာ ထိုနိုင်ငံမှ ကုန်တင်ပို့သူ၏ အဆောက်အအုံတစ်ခုခုမှ ထွက်ခွာမှုဖြင့်စတင်ပြီး အဆုံးသတ်အသုံးချမည့်နိုင်ငံရှိ ကုန်လက်ခံသူ၏ အဆောက်အအုံတစ်ခုခုသို့ ရောက်ရှိမှုဖြင့် အဆုံး သတ်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဒ) ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုသည်မှာ အောက်ပါပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုခုကို ဆိုသည်-
(၁) သူတစ်ဦးဦးအား သေစေရန် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန်နာကျင်စေရန်သော်လည်းကောင်း၊ အရာ ဝတ္ထုပစ္စည်းများအား ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရန်သော်လည်းကောင်း ပုံစံရေးဆွဲတီထွင် ထုတ်လုပ် သည့် သို့မဟုတ် စွမ်းအားရှိသည့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော သို့မဟုတ် မီးလောင်စေတတ်သော လက်နက် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာ၊
(၂) အဆိပ်အာနိသင်ရှိသော ဇီဝပစ္စည်းများ ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ အဆိပ်အတောက်များ၊ အလားတူ ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် ရေဒီယို သတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်မိစေခြင်းဖြင့် သူတစ်ဦးဦးအား သေစေရန် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် နာကျင်စေ ရန်သော်လည်းကောင်း၊ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများအား ဆိုးရွားစွာပျက်စီးဆုံးရှုံး စေရန်သော် လည်းကောင်း ပုံစံရေးဆွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်သည့် သို့မဟုတ် စွမ်းအားရှိသည့် လက်နက် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာ။
(ဓ) ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုသည်မှာ ပျော့ပျောင်းသော သို့မဟုတ် ဆွဲဆန့်လျှင် ရုန်းတတ်သော ပုံသဏ္ဌာန်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ပေါက်ကွဲစေရန် ပြုလုပ်ထားသော ပလတ်စတစ် ဝတ္ထုပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပလတ်စတစ် ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းရှာဖွေရေးအတွက် အမှတ်အသားပြုလုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများဖြင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်သော အခြားအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုခုလည်း ပါဝင် သည်။
(န) သင်္ဘောဆိုသည်မှာ စွမ်းအင်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် မောင်းနှင်သော ရေယာဉ်၊ ရေအောက်ငုပ်လျှိုး မောင်းနှင်နိုင်သော ရေယာဉ် သို့မဟုတ် ရေပြင်ပေါ်တွင် ရွေ့လျားသွားလာနိုင်သော အခြား ရေယာဉ် တစ်မျိုးမျိုး အပါအဝင် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်နှင့် အမြဲစွဲကပ်ထားခြင်းမရှိသော မည်သည့် ရေယာဉ်မျိုးကို မဆို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရွေ့လျားနိုင်သော ကမ်းလွန်သယံဇာတ တူးဖော်ရေးစင်နှင့် ရှပ်ပြေး အမြန်ယာဉ်များလည်း ပါဝင်သည်။
(ပ) အကြမ်းဖက်သမားဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ဥပဒေနှင့် မညီဘဲ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်သူ ကိုသော်လည်း ကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်သူ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရန် အခြားသူများအား ညွှန်ကြားသူ သို့မဟုတ် စည်းရုံးသိမ်းသွင်း သူကိုသော်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပါဝင်ထောက်ပံ့သူကို သော်လည်းကောင်း ဆိုသည်။
(ဖ) အကြမ်းဖက်အုပ်စုဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုကို ကျူးလွန်ရန် အချိန်ကာလတစ်ခုယူ၍ ဖွဲ့စည်းထားသည့် လူနှစ်ဦးနှင့်အထက် ပါဝင်သော အသင်းအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကုလ သမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အရလည်းကောင်း၊ ဗဟိုအဖွဲ့က ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့်လည်းကောင်း ကြေညာထားသည့် အကြမ်းဖက်အုပ်စုလည်း ပါဝင်သည်။
(ဗ) လှုံ့ဆော်မှုဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရေးအတွက် လှုံ့ဆော်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သတင်းစကား သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကို သိသိသာသာဖြစ်စေ၊ မသိမသာဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်း နည်းဖြင့် ကြားမြင်သိရှိစေခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဘ) ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ဆိုသည်မှာ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသူအား အကျဉ်းထောင်၌ သေသည် အထိ ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေရန် ချမှတ်သည့် ထောင်ဒဏ်ကို ဆိုသည်။
(မ) အများပြည်သူ အသုံးပြုသည့် နေရာ ဆိုသည်မှာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အစိုးရ ဆိုင်ရာကိစ္စ၊ ဖျော်ဖြေမှု၊ အပန်းဖြေမှု စသည့်ကိစ္စများ အတွက် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုခုအတွက်ဖြစ်စေ၊ အခိုက်အတန့်ဖြစ်စေ၊ အချိန်တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်စေ အများပြည်သူ ဝင်ထွက်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရှိသော အဆောက်အအုံ၊ မြေနေရာ ၊ ကုန်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ရေလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် အလားတူအခြားနေရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
(ယ) ရန်ပုံငွေဆိုသည့် စကားရပ်တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
(၁) ထိတွေ့၍ ရနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မရနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်စေ၊ မရွှေ့မပြောင်း နိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ၊ ငွေရေးကြေးရေး ပိုင်ဆိုင် မှုများနှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊
(၂) ဘဏ်အပ်နှံငွေများ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များ၊ ဘဏ်ချက်လက်မှတ်များ၊ ငွေပေးအမိန့်များ၊ အစုရှယ်ယာများ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ ငွေတိုက်စာချုပ်များ၊ ဘဏ်ငွေလွှဲလွှာများနှင့် ငွေထုတ်ပေးခွင့်စာများ အပါအဝင် မည်သည့်အီလက်ထရောနစ် သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း လမ်းဖြင့် မဆို ရှိသည့် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ်များအတွက် အထောက်အထား ဖြစ်သော တရားဝင်စာတမ်းအမှတ်အသားများ သို့မဟုတ်စာချုပ်စာတမ်းများ။
(ရ) ဗဟိုအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းသော အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(လ) တပ်ဖွဲ့ဝင်များဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ် မှုများ၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စုများနှင့် အကြမ်းဖက်သမားများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရေး၊ သက်သေခံ ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးယူရေးတို့အတွက် ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့များ၊ ငွေကြေး ဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဆိုသည်။
(က) လူသားတို့၏ အသက်နှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သဘာ ဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကောင်း အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်ရန်၊
(ခ) နိုင်ငံတော်၏အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံ အသုံးပြု၍ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်၊
(ဂ) အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ၊ အကြမ်းဖက်သမားများ၊ ယင်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများ၊ လှုံ့ဆော်မှုများ၊ အကြမ်း ဖက်မှုကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်းများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို ဖော်ထုတ်၍ ကာကွယ်တားဆီးအရေးယူရန်၊
(ဃ) အကြမ်းဖက်မှုများကို ကာကွယ်ရေးနှင့် တားဆီးနှိမ်နင်းရေးတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်း တို့နှင့် လိုက်လျောညီထွေ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(င) ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ပူးပေါင်းထိန်း သိမ်းစောင့် ရှောက်ရန်။
(က) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ဝန်ကြီးများ၊ အစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် များက အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်သည့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက် ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်း ရမည်။
(ခ) ဗဟိုအဖွဲ့ကို လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၆။ ဗဟိုအဖွဲ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စီမံချက်များ ချမှတ် ခြင်း၊
(ခ) လိုအပ်သော လုပ်ငန်းကော်မတီများနှင့် အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ပေး ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(ဂ) လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များ၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(ဃ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်သည့် ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည့် အဖျက်စွမ်းအား ကြီးမား သော လက်နက်များအား တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ဖယ်ရှားရေးနှင့် ဖျက်ဆီးရေးတို့အတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ကြေညာချက်အရဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုတစ်ခုခုကို အကြမ်းဖက်အုပ်စု အဖြစ်လည်းကောင်း၊ သူတစ်ဦးဦးကို အကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ကြေညာ ခြင်း နှင့် ကြေညာချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊
(စ) အကြမ်းဖက်အုပ်စု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်သမားက ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ငှားရမ်းအသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ပျံသန်းသော လေယာဉ်များအား နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်မြေအတွင်း ဆင်းသက် ခြင်း၊ ယင်းမှ ပျံတက်ထွက်ခွာခြင်း မပြုနိုင်ရေး အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) အကြမ်းဖက်မှုများကို တားဆီးနှိမ်နင်းရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးတို့အတွက် ဤဥပဒေ အခန်း(၁၅) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဝင် နိုင်ငံများနှင့်လည်းကောင်း ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဝင်နိုင်ငံများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဤဥပဒေ အခန်း(၁၆)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အကြမ်းဖက်သမားများကို အပြန်အလှန်လွှဲပြောင်းပေးရန် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ဈ) ဤဥပဒေအခန်း (၁၈) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တည်ထောင်ထားရှိသော အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်း၊
(ည) အကြမ်းဖက်မှုများကို တားဆီးနှိမ်နင်းရာတွင် ပါဝင်ပြီး ထိရောက်စွာ တားဆီးနှိမ်နင်းသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများနှင့် ပြည်သူများအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်း၊
(ဋ) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စု၏ ကြံစည်အားထုတ်မှုကို ကြိုတင်သတင်း ပေးသူ၏ လုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ၊ အရေးယူမှု သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုမှုများတွင် သတင်းပေးသူနှင့် သက်သေ များ၏ လုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ ထိရောက်စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဌ) ပုဒ်မခွဲ (င) အရ အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် ကြေညာသည့်အခါ ယင်းအကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများကို ထိန်းချုပ်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဍ) ပုဒ်မခွဲ (ဌ) ပါအကြမ်းဖက်အုပ်စု ပိုင်ပစ္စည်းနှင့် ရန်ပုံငွေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု၊ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတို့ကို မည်သူမျှ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဎ) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် ဗဟိုအဖွဲ့က အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက် အုပ်စုအဖြစ် ကြေညာထားရာမှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်အခါ ပုဒ်မခွဲ (ဌ) ပါပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများ အပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်းအမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(ဏ) သဘောရိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ အကျိုးစီးပွားကို မထိခိုက်စေရန် ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ပေးခြင်း၊
(တ) ပုဒ်မခွဲ (ဌ) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဏ) ထိ လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့်ဌာန သို့မဟုတ် တပ်ဖွဲ့၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုကို လမ်းညွှန် ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ထ) အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ရန် သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ်မရည်ရွယ်သော အဖွဲ့အစည်းများအား အသွင်ယူဖွဲ့စည်းခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရာလမ်းကြောင်းအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ခြင်းမပြုနိုင်စေရန် လိုအပ်သော လမ်းညွှန်မှုနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချမှတ်ခြင်း၊
(ဒ) အကြမ်းဖက်မှုကို ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ တားဆီး နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အများပြည်သူသို့ အသိပညာ ပေးရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများအား လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဓ) အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး၊ တိုက်ဖျက်ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက် များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အခါအားလျော်စွာ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့က ပေးအပ်သည့် အခြားတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။
မြို့ပြလေကြောင်းပျံသန်းရေးနှင့် လေဆိပ်တို့ကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ဥပဒေမဲ့ပြုလုပ်မှုများကို တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်းနှင့် တိုက်ဖျက်ခြင်း
၇။ မည်သူမဆို လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန် လေယာဉ်ပေါ်၌ အောက်ပါတစ်ခုခုကို ဥပဒေနှင့် မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်ပါက မြို့ပြလေကြောင်းပျံသန်းရေးနှင့် လေဆိပ်တို့ကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ပြစ်မှု မြောက်သည်-
(က) သူတစ်ဦးဦးက လေယာဉ်ပေါ်တွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှု၊
(ခ) လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန် လေယာဉ်ကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် လေယာဉ်ပေါ်ရှိသူကို အတင်း အဓမ္မပြုလုပ်မှု၊
(ဂ) မြို့ပြလေကြောင်းပျံသန်းရေးကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် အတင်းအဓမ္မပြုလုပ်မှု၊
(ဃ) လေယာဉ်ပေါ်ရှိ ခရီးသည်များ၊ လေယာဉ်အမှုထမ်းများ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေမှု၊
(င) လေယာဉ်ပေါ်တွင် အစီအစဉ်တကျရှိမှုနှင့် စည်းကမ်းသေဝပ်မှုကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေမှု၊
(စ) လေယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါသူက လေယာဉ်မှူးအား အင်အားသုံး၍ဖြစ်စေ၊ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေ မည်ဟုခြိမ်းခြောက်၍ဖြစ်စေ လေယာဉ်ပျံသန်းမောင်းနှင်မှုကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်မှု၊ အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးမှု သို့မဟုတ် လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန် ဥပဒေနှင့် မညီဘဲ ကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်း မောင်းနှင်ပျံသန်းစေမှု၊
(ဆ) ပုဒ်မခွဲ(က) မှ ပုဒ်မခွဲ(စ) ထိပါရှိသော ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။
၈။ မည်သူမဆို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို တမင်ပြုလုပ်လျှင် လေယာဉ်ကို ဥပဒေမဲ့သိမ်းပိုက်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာ ရောက်သည်-
(က) အတင်းအဓမ္မအင်အားသုံး၍ဖြစ်စေ၊ ခြိမ်းခြောက်၍ဖြစ်စေ၊ အတင်းအဓမ္မတိုက်တွန်း၍ဖြစ်စေ၊ အခြားသောနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့အောင် ခြောက်လှန့်၍ဖြစ်စေ၊ အခြားခေတ်မီ နည်းပညာတစ်ခုခုဖြင့်ဖြစ်စေ လေယာဉ်ကို သိမ်းပိုက်မှု သို့မဟုတ် လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန် ပျံသန်းမှုကို ထိန်းချုပ်မှု၊
(ခ) သူတစ်ဦးဦးအား သေစေရန် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန်နာကျင်စေရန်သော်လည်းကောင်း ၊ပစ္စည်းကို ဖြစ်စေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြစ်စေ ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေရန်သော်လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှုပေး လျက်ရှိသော လေယာဉ်ကိုအသုံးပြုမှု၊
(ဂ) မြို့ပြလေကြောင်းပျံသန်းရေးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လေဆိပ်အား ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ပြုလုပ်သည့် ပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရန် ခြိမ်းခြောက်မှု သို့မဟုတ် အခြေအနေအရ ယုံကြည်ရသည့် ထိုခြိမ်းခြောက်မှုကို သူတစ်ဦးဦးအား လက်ခံစေမှု၊
(ဃ) လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်၌ သူတစ်ဦးဦးကို သေစေခြင်း၊ အပြင်းအထန်နာကျင်စေခြင်း သို့မဟုတ် အခြေခံအဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်း ကိရိယာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေသည့် သို့မဟုတ် ထိုသို့ဖြစ်စေ နိုင်သည့် ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိ ကြွဒြပ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အလားတူပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုဖြင့် လေယာဉ်ကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေမှု၊ ထိုလေယာဉ်ပေါ်တွင် အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ထိုပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကို လေယာဉ်ပေါ်မှ စွန့်ပစ်မှု သို့မဟုတ် ပစ်ချမှု၊
(င) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါဇီဝ၊ ဓာတု နှင့် နျူကလီးယားလက်နက်၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိ ကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ ထိုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန် အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများ၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များကို ပုံစံထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးအပ်ခြင်းပြုရာတွင် အသုံးပြုသည့် နည်းပညာနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဆော့ဝဲများ သို့မဟုတ် အလားတူပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကိုလေယာဉ်ဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်စေမှု သို့မဟုတ် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး အတွက် ဖြည့်ဆည်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးမှု၊
(စ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (င) အထိ ပါရှိသော ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။
၉။ မည်သူမဆို လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်တွင် အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်လျှင် မြို့ပြလေကြောင်းပျံသန်းရေးကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ပြစ်မှုမြောက်သည်-
(က) လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန် လေယာဉ်ပေါ်တွင် လေယာဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို အန္တရာယ်ဖြစ် စေရန် လေယာဉ်ပေါ်ရှိသူတစ်ဦးဦးကို အတင်းအဓမ္မပြုလုပ်မှု၊
(ခ) လေယာဉ်ကို ပျက်စီးစေရန်သော်လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်ကို ပျံသန်းခြင်း မပြုနိုင်စေရန် သော်လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်ပျံသန်းစဉ် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်သော်လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှုပေး နေသည့် လေယာဉ်ကို ဖျက်ဆီးမှု၊ ထိခိုက်ပျက်စီးစေမှု သို့မဟုတ် လေယာဉ်ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို လေယာဉ်ပေါ်၌ ချထားမှု သို့မဟုတ် ထားရှိစေမှု၊
(ဂ) လေယာဉ်ပျံသန်းစဉ် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် လေကြောင်းလမ်းညွှန်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ စနစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးမှု၊ ထိခိုက်ပျက်စီး စေမှု သို့မဟုတ် လေကြောင်းလမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်မှု၊
(ဃ) လေယာဉ်ပျံသန်းမှုအား ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် မမှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို သိလျက်နှင့် ဆက်သွယ်ပေးပို့မှု၊
(င) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ထိပါရှိသော ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ်ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။
၁၀။ မည်သူမဆို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်လျှင် မြို့ပြ လေကြောင်းပျံသန်းရေးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လေဆိပ်အား ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ အတင်း အဓမ္မပြုလုပ်သည့် ပြစ်မှုမြောက်သည်-
(က) မြို့ပြလေကြောင်းပျံသန်းရေးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူတစ်ဦးဦးအား အပြင်းအထန်နာကျင် စေခြင်း သို့မဟုတ် သေစေခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းသို့ဖြစ်စေ တန်ရာသော အတင်းအဓမ္မပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်မှု၊
(ခ) လေဆိပ်ကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်စေတန်ရာအောင် သော်လည်း ကောင်း၊ မြို့ပြလေကြောင်းပျံသန်းရေးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လေကြောင်းပျံသန်းရေး ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံစနစ်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုသော်လည်းကောင်း၊ လေဆိပ် တွင်ရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း မလုပ်ကိုင်ဘဲ ရပ်နားနေသော လေယာဉ်ကိုသော်လည်းကောင်း ဖျက်ဆီးမှု သို့မဟုတ် လေဆိပ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်မှု၊
(ဂ) ပျံသန်းနေသော လေယာဉ်ကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် မြို့ပြလေကြောင်း ပို့ဆောင် ရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လေဆိပ်ကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်အလို့ငှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ တစ်ဦးဦးအား ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော ဆောင်ရွက်မှုကို ပြုစေရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သော ဆောင်ရွက်မှုကို မပြုနိုင်စေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အတင်းအကျပ် ပြုလုပ်ခြင်း၊
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ထိ ပါရှိသော ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်လုပ် ဆောင်မှု။
၁၁။ နိုင်ငံတော်၏ လေဆိပ်တစ်ခုခုမှ ပြည်ပသို့ ပျံသန်းထွက်ခွာသွားသည့် လေယာဉ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်၏ လေဆိပ်တစ်ခုခုသို့ ဆင်းသက်မည့်လေယာဉ်၏ လေယာဉ်မှူးသည် လေယာဉ်ဝန်ဆောင် မှုပေးချိန်တွင် လေယာဉ်ပေါ်၌ ဥပဒေနှင့် မညီဘဲ တမင်ပြုလုပ်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်တော့မည်ဟုသော်လည်းကောင်း ယုံကြည်ရပြီး လေယာဉ် သို့မဟုတ် လေယာဉ်ပေါ်ရှိလူများ၊ ပစ္စည်းများအား ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်ပေါ်တွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက်လည်းကောင်း ချက်ချင်းအရေး ပေါ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ-
(က) ထိုကျူးလွန်သူအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူထံသို့ အပ်နှံရန်ဖြစ်စေ၊ လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းစေရန်ဖြစ်စေ ထိုသူကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ယင်းသို့ဖမ်း ဆီးထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လေယာဉ်အမှုထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ၏ အကူအညီကို ရယူခြင်း သို့မဟုတ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစေရန် အခွင့်အာဏာပေးခြင်း အပါအဝင် အခြားသင့်လျော်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုနိုင်သည်။
(ခ) ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ သိမ်းပိုက်ခံရသည့် လေယာဉ်အား နိုင်ငံတော်၏ သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ၏ လေယာဉ်ကွင်းသို့ မဆင်းသက်မီ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ အခြေအနေအရပ်ရပ်အား မြို့ပြလေကြောင်း ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူထံသို့ ဖြစ်နိုင်သမျှ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။
၁၂။ (က) နိုင်ငံတော်၏ မြို့ပြလေကြောင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသည် ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အကြောင်းကြားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ နိုင်ငံတော်တွင်ဖြစ်စေ၊ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လေယာဉ်၏ လေယာဉ်မှူးကို ထိုဥပဒေနှင့် မညီဘဲ တမင်ပြုလုပ်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းစေရန် ခွင့်ပြုရမည်။
(ခ) လေယာဉ်မှူးသည် နိုင်ငံတော်၏ လေဆိပ်သို့ဖြစ်စေ၊ အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ လေယာဉ် ကွင်းသို့ဖြစ်စေ လေယာဉ်ဆင်းသက်ပြီးသည့်အခါ ဤအခန်းပါ ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ပြု လုပ်သည့် ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သည်ဟု ယုံကြည်ရသူအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူထံသို့ သက်သေခံအထောက်အထားများနှင့် အတူဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ လွှဲအပ်နိုင်သည်။
(ဂ) ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူသည် ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ လွှဲအပ်ပေးသော ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ပြုလုပ်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား လက်ခံပြီးနောက် ဤဥပဒေအခန်း(၁၆) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။
(ဃ) လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်တွင် ပုဒ်မခွဲ (က) ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်များက လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအား ပြစ်မှုကြောင်းအရသော် လည်းကောင်း၊ တရားမကြောင်းအရသော်လည်းကောင်း အရေးယူခြင်းမပြုရ။
၁၃။ လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်တွင် လေယာဉ်ပေါ်၌ ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ပြုလုပ်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ရရှိသည့် သတင်းအချက် အလက်မှာ ယုံကြည်ရသော အထောက်အထားရှိသည့်အခါ ဗဟိုအဖွဲ့ကဖြစ်စေ၊ ဗဟိုအဖွဲ့က လွှဲအပ်သည့် လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတို့ကဖြစ်စေ အောက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) လေယာဉ်ကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ လေယာဉ်မှူးက ပြန်လည် ကြီးကြပ် ထိန်းကျောင်း၍ မောင်းနှင်နိုင်ရေး၊
(ခ) လေယာဉ်မှူးက နိုင်ငံတော်၏လေဆိပ်တစ်ခုခုတွင် ဆင်းသက်ခွင့်တောင်းခြင်း၊ ထိုလေယာဉ်ပေါ်မှ ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ပြုလုပ်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ဆင်းစေပြီး လွှဲပြောင်းအပ်နှံခြင်းတို့ကို လက် ခံခွင့်ပြုရေး၊
(ဂ) လေယာဉ်ကို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်သိမ်းပိုက်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ဖမ်းဆီးထိန်း သိမ်းရေးအတွက် တားဆီးနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တာဝန်ပေးရေး၊
(ဃ) လေယာဉ်အမှုထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ ယင်းတို့၏ လိုရာခရီးသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာနိုင်ရေး။
၁၄။ ဤအခန်းပါ လေယာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် တပ်မတော်၊ စစ်ရေးစစ်ရာကိစ္စ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသော လေယာဉ်များနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။
၁၅။ မည်သူမဆို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပေးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ် အောက်ဖော်ပြပါပြုလုပ်မှု တစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျူးလွန်လျှင် ပြစ်မှုမြောက်သည်-
(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပေးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ် လူသတ်မှု၊ လူပြန်ပေးမှု သို့မဟုတ် ယင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို အခြားနည်းဖြင့်ကျူးလွန်မှု သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိခိုက်နစ်နာစေမှု၊
(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဖြစ်စေ အန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ယင်း၏ တရားဝင်ပရဝဏ်၊ ကိုယ်တိုင်နေထိုင်သည့် အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် စီးနင်းသွားလာသည့် ယာဉ်ကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်နစ်နာစေမှု၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့၌ ပါရှိသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် ခြိမ်းခြောက်မှု၊
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ထိ ပါရှိသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေး ကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။
၁၆။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပေးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ အပေါ် အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ တားဆီးနှိမ်နင်း ရေးနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက် အစီအမံများ ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ပြုရမည်။
ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုများကို တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်း
(က) သူတစ်ဦးဦးအား ဖမ်းဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းခြင်းပြု၍ အခြားသူတစ်ဦးကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်ကို ဖြစ်စေ၊ အစိုးရအချင်းချင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်စေ၊ ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းအဖွဲ့ကိုဖြစ်စေ၊ လူတစ်စုကိုဖြစ်စေ ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သော ဆောင်ရွက်မှုကို ပြုစေရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သော ဆောင်ရွက်မှုကို မပြုစေရန်တောင်းဆိုပြီး ယင်းတောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်လျှင် ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူကို သေစေမည်၊ အပြင်းအထန်နာကျင်စေမည် သို့မဟုတ် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဟုသော်လည်းကောင်း၊ ထိုတောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံပါက ဓားစာခံအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားသူကို ပြန်လွှတ်ပေးမည် ဟုသော် လည်းကောင်း စည်းကမ်းချက်ထား၍ ခြိမ်းခြောက်မှုပြုလျှင် ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာရောက်သည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုပြုပါက အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်ရာ ရောက်သည်။
၁၈။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသည် ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသည့် အကြမ်းဖက် ကျူးလွန်မှုများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးနှင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက် အစီအမံများ ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆောင်ရွက်စေ ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ ပြုရမည်။
နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ နျူကလီးယားအဆောက်အအုံများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုများနှင့် ဇီဝ ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များကို တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်း
၁၉။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျူးလွန်လျှင် နျူကလီးယား ဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက် ဆိုင်ရာပြစ်မှုမြောက် သည် –
(က) သူတစ်ဦးဦး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ကို ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သော ဆောင်ရွက်မှုကို ပြုစေရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သော ဆောင်ရွက်မှုကို မပြုစေရန်သော်လည်းကောင်း၊ သူတစ်ဦးဦးကိုသေစေရန်၊ အပြင်းအထန်နာကျင်စေ ရန်သော် လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီး စေရန်သော် လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေရန်သော်လည်းကောင်း နျူကလီးယား ဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များကို တစ်နည်းနည်း ဖြင့် လက်ခံမှု၊ လက်ဝယ်ထားရှိမှု၊ အသုံးပြုမှု၊ ပြုလုပ်မှု၊ လွှဲပြောင်းမှု၊ ပြောင်းလဲမှု၊ စွန့်ပစ်မှု၊ ပျံ့လွင့်စေမှု သို့မဟုတ် ဖြန့်ကြက်ချထားမှု၊
(ခ) နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်များ ကို ခိုးယူမှု၊ လုယက်မှု၊ အလွဲသုံးစားပြုမှုနှင့် လိမ်လည်အတုပြုလုပ်မှု၊
(ဂ) နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဒြပ်ပစ္စည်း၊ ပုဒ်မ ၃ ၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယားအဆောက်အအုံ၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ပြည်တွင်းသို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပသို့ဖြစ်စေ သယ်ဆောင်မှု၊ ပေးပို့မှု သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းမှု၊
(ဃ) သူတစ်ဦး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ကို ဥပဒေနှင့်မညီ ညွတ်သော ဆောင်ရွက်မှုကို ပြုစေရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သော ဆောင်ရွက်မှုကို မပြုစေရန် အလို့ငှာ ပုဒ်မခွဲ(က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ( ခ) ပါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် ခြိမ်းခြောက်မှု၊
(င) ခြိမ်းခြောက်၍ဖြစ်စေ၊ အတင်းအဓမ္မ အင်အားအသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ကြောက်ရွံ့အောင် ခြိမ်းခြောက်၍ဖြစ်စေ နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ နျူကလီး ယားအဆောက်အအုံ၊ ဇီဝ ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များကို တောင်းဆိုမှု၊
(စ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (င) ထိပါရှိသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။
၂၀။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျူးလွန်လျှင် နျူကလီးယား အဆောက်အအုံဆိုင်ရာပြစ်မှု မြောက်သည်-
(က) နိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ နျူကလီးယားအဆောက်အအုံကို တည်ဆဲဥပဒေ နှင့်အညီ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ သူတစ်ဦးဦးကို သေစေရန်၊ အပြင်းအထန်နာကျင်စေရန်၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေရန်သော်လည်းကောင်း၊ ထိုသို့တစ်စုံတစ်ရာဖြစ် စေရန် ရည်ရွယ်၍သော်လည်းကောင်း ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းများကို သိလျက်နှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်စေခြင်းဖြင့် နျူကလီးယားအဆောက်အအုံများကို ဖြစ်စေ၊ ယင်းအဆောက်အအုံများ၏ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်စေသည့် ညွှန်ကြားမှု၊
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် ခြိမ်းခြောက်မှု၊
(ဂ) ခြိမ်းခြော က်၍ဖြစ်စေ၊ အတင်းအဓမ္မ အင်အားအသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ကြောက်ရွံ့အောင် ခြိမ်းခြောက်၍ဖြစ်စေ နျူကလီးယားအဆောက်အအုံကို တောင်းဆိုမှု၊
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ(ဂ) ထိပါရှိသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေး ကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။
၂၁။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသည် နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာတင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ထားခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ လုံခြုံမှုအဆင့်သတ်မှတ်၍ လိုအပ်သောအစီအမံများ ချမှတ်ပြီး ယင်းလုံခြုံမှု အစီအမံများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကြီးကြပ် ထိန်းချုပ် ရမည်။
၂၂။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နျူကလီးယားသယ်ယူပို့ဆောင်မှု ပြုနေ စဉ် ကာလအတွင်း ပုဒ်မ ၂၁ အရ သတ်မှတ်ထားသော အမျိုးအစားနှင့်အဆင့်အလိုက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်သူ သို့မဟုတ် တာဝန်ယူ၍ သယ်ယူပို့ဆောင်သူထံမှ အာမခံချက်များ မရရှိလျှင် နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃ ၊ ပုဒ်မခွဲ (တ) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါနျူကလီးယား အဆောက် အအုံများကို-
(က) ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ပေးစေခြင်း မပြုရ၊
(ခ) ပြည်ပမှ တင်သွင်းရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ပေးစေခြင်း မပြုရ၊
(ဂ) နိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ကုန်းကြောင်း၊ ရေကြောင်း သို့မဟုတ် လေကြောင်းဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း ကိုသော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ လေဆိပ်၊ သင်္ဘောဆိပ်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသယ် ယူပို့ဆောင်ခြင်း ကိုသော်လည်းကောင်း ခွင့်မပြုရ။
၂၃။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တမင်ကျူးလွန်လျှင် နျူကလီးယား ဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃ ၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါနျူကလီးယား အဆောက်အအုံများ တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာရောက်သည်-
(က) နျူကလီးယား ဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃ ၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါနျူကလီးယား အဆောက်အအုံကို ပုဒ်မ ၂၁အရ သတ်မှတ်သည့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အစီအစဉ် များနှင့် မကိုက်ညီဘဲ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းမှု၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့မှု၊ နိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ကုန်းကြောင်း၊ ရေကြောင်း သို့မဟုတ် လေကြောင်းဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု ၊ နိုင်ငံတော်ကို ဖြတ်သန်း၍ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်မှတစ်ဆင့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊
(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ ဓာတ်ရောင်ခြည်အန္တရာယ်တိုးမြှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မဟုတ်ဘဲ နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် နျူကလီးယားအဆောက်အအုံများကိုလည်းကောင်း၊ နျူကလီးယားဆိုင်ရာ နည်းပညာကို လည်းကောင်း လွှဲပြောင်းပေးမှု။
၂၄။ မည်သူမဆို အောက်ဖော်ပြပါ ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်လျှင် နျူကလီး ယား အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှု မြောက်သည်-
(က) သူတစ်ဦးဦးကို သေစေရန် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် နာကျင်စေရန်သော်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေရန်သော်လည်းကောင်း၊ ထိုသို့ဖြစ်စေ ရန်သော်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍-
(၁) နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာကို အသုံးပြု၍ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ကျူးလွန်မှု သို့မဟုတ် ထိုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို အသုံးပြုမှု၊ လက်ဝယ်ထားမှု သို့မဟုတ် ပြုလုပ်မှု၊
(၂) နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာ၊ နျူကလီးယား အဆောက်အအုံကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ ဖျက်ဆီး၍ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း ထုတ်လွှင့်မှု သို့မဟုတ် ဓာတ်ရောင်ခြည်များ ပျံ့လွင့်စေမှု။
(ခ) သူတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်ကိုဖြစ်စေ ဥပဒေနှင့် မညီသော ဆောင်ရွက်မှုကို ပြုစေရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်ညီသော ဆောင်ရွက်မှုကို မပြုနိုင်စေရန် အတင်းအဓမ္မပြုလုပ်၍ နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာ၊ နျူကလီးယားအဆောက်အအုံကို အသုံးပြုမှု၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့ပါ ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်မှု၊ အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။
၂၅။ (က) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နျူကလီးယား သယ်ယူပို့ဆောင်မှု ပြုရာတွင် အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်အဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည်-
(၁) နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် နျူကလီးယားအဆောက်အအုံများအား လုံခြုံမှုအစီအမံများနှင့် စနစ်များထားရှိရေးနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေး၊
(၂) နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ မဖြစ်ပွားစေရန်နှင့် နျူကလီးယား အဆောက်အအုံများ အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုများမှ ကင်းဝေးစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အစီအမံများ ပြုလုပ်ရေး၊
(၃) နျူကလီးယားအဆောက်အအုံများ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပွားပါက ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုများ လျော့နည်းနိုင်သမျှ လျော့နည်းစေရန် စီမံထားရှိရေး၊
(၄) နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ခိုးယူခြင်းခံရသည့်အခါ ထိုပစ္စည်းကို ပြန်လည်ရရှိရေး။
(ခ) ဤအခန်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ပေးပို့ရာ၌ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းကောင်း၊ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်းကောင်း လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၆။ ဤအခန်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည်-
(က) ငြိမ်းချမ်းသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃ ၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါနျူကလီးယား အဆောက်အအုံများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းတို့အပေါ်တွင်လည်း သက်ရောက် သည်။
(ခ) ငြိမ်းချမ်းရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ ရေဒီယို သတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ နျူကလီးယားအဆောက်အအုံကိုဖြစ်စေ အတင်းအဓမ္မအင်အား သုံး၍ အသုံးပြုခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသို့အသုံးပြုရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်မကောက်ယူရ။
(ဂ) ငြိမ်းချမ်းရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ တိုးမြှင့်ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေးအလို့ငှာ နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ နျူကလီးယား အဆောက်အအုံများနှင့် နျူကလီးယားနည်းပညာလွှဲပြောင်းခြင်းကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ။
(ဃ) နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃ ၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါနျူကလီးယား အဆောက်အအုံများကို ပြည်တွင်းရှိနေရာတစ်ခုခုမှ နိုင်ငံတကာရေပြင် သို့မဟုတ် လေထုကို ဖြတ်သန်း၍ ပြည်တွင်းရှိ ဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်၊ နယ်စပ်ဝင်ထွက်ပေါက် သို့မဟုတ် အခြားနေရာ တစ်ခုခုသို့ ကုန်းလမ်း၊ ရေကြောင်း သို့မဟုတ် လေကြောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထိုဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်၊ နယ်စပ် ဝင်ထွက်ပေါက် သို့မဟုတ် အခြားနေရာတစ်ခုခုမှ တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခြင်း အပေါ်တွင် လည်း သက်ရောက်သည်။
(င) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့် နိုင်ငံတကာလူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အခြေခံမူများတွင် ပါရှိသော နိုင်ငံအသီးသီးနှင့် ပုဂ္ဂလိက တို့၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ။
(စ) လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေစဉ် အတောအတွင်း နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ပွဲအတွင်း လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် အညီ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုများအပေါ်တွင်လည်းကောင်း သက်ရောက်ခြင်း မရှိစေရ။
(ဆ) စစ်ရေးကိစ္စအတွက် နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ နျူကလီးယား အဆောက်အအုံတွင် ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာကိုဖြစ်စေ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ကိုင်စွဲခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထား ခြင်းအပေါ်တွင် သက်ရောက်ခြင်း မရှိစေရ။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ဥပဒေမဲ့ပြုလုပ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်း
၂၇။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုကို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင် ကျူးလွန်လျှင် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ဥပဒေမဲ့ပြုလုပ်သည့် ပြစ်မှု မြောက်သည်-
(က) အတင်းအဓမ္မအင်အားသုံး၍ဖြစ်စေ၊ ခြိမ်းခြောက်၍ဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ကြောက်ရွံ့ အောင် ပြုလုပ်၍ဖြစ်စေ သင်္ဘောကို ဖမ်းဆီးသိမ်းပိုက်မှု သို့မဟုတ် သင်္ဘောသွားလာရေးကို ထိန်းချုပ်မှု၊
(ခ) သင်္ဘောဖြင့် ရေကြောင်းသွားလာ ရေးကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောပြုလုပ်မှုဖြင့် သင်္ဘောပေါ်ရှိ သူအား အတင်းအဓမ္မပြုလုပ်မှု၊
(ဂ) သင်္ဘောကိုဖျက်ဆီးမှု သို့မဟုတ် သင်္ဘောဖြင့် ရေကြောင်းသွားလာရေးကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ် စေ အောင် သင်္ဘောကိုဖြစ်စေ၊ သင်္ဘောပေါ်ပါကုန်စည်များကိုဖြစ်စေ ဖျက်ဆီးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီး စေမှု၊
(ဃ) သင်္ဘောကို ပျက်စီးစေရန်သော်လည်းကောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေ ရန်သော်လည်းကောင်း၊ သင်္ဘောကိုဖြစ်စေ၊ သင်္ဘောပေါ်ပါ ကုန်ပစ္စည်း များကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်ပျက်စီး စေရန်သော်လည်းကောင်း ဖျက်ဆီးနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကို သင်္ဘောပေါ်တွင် ထားရှိမှု သို့မဟုတ် ထားရှိစေမှု၊
(င) ရေကြောင်းလမ်းညွှန်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံစနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖျက်ဆီးမှု၊ ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေမှု သို့မဟုတ် ထိုအဆောက် အအုံစနစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆိုးရွားစွာ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြင့် သင်္ဘော၏ရေကြောင်း သွားလာမှုကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ပြုလုပ်မှု၊
(စ) သင်္ဘော၏ရေကြောင်းသွားလာမှုကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် မှားယွင်းသော သတင်းအချက် အလက်များကို သိလျက်နှင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမှု၊
(ဆ) သူတစ်ဦးဦးကိုသေစေရန်၊ အပြင်းအထန် နာကျင်စေရန် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီး စေရန် သော်လည်းကောင်း၊ သင်္ဘောကိုဖြစ်စေ၊ ထိုသင်္ဘောပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ထိုသင်္ဘောပေါ်မှဖြစ်စေ ပေါက်ကွဲစေ တတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက် ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ အခြားဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောပစ္စည်း သို့မဟုတ် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောပစ္စည်းများကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်မှု၊
(ဇ) ပုဒ်မခွဲ (ဆ) တွင် ပါရှိသည့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်များနှင့် အလားတူ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အခြားအရင်းအမြစ်ပစ္စည်း၊ အလိုအလျောက် အထူးပြိုကွဲနိုင်သည့်ပစ္စည်း၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အထူးပုံစံထုတ် ပြုလုပ် ထားသော သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသော ပစ္စည်းကိရိယာများကို သိလျက်နှင့် သင်္ဘောဖြင့်သယ်ယူ ပို့ဆောင် ပေးမှု၊
(ဈ) သူတစ်ဦးဦးကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် သေစေရန်၊ အပြင်းအထန် နာကျင်စေရန် သို့မဟုတ် အခြေခံ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေရန် သင်္ဘောကို အသုံးပြုမှု၊
(ည) အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သိလျက်နှင့် အကြမ်းဖက်သမားအား သင်္ဘောဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးမှု၊
(ဋ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ည)အထိ ပါရှိသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှု၊
(ဌ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဋ)အထိ ဖော်ပြထားသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ရာတွင်ဖြစ်စေ သူတစ်ဦးဦးကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေမှု သို့မဟုတ် သေစေမှု၊
(ဍ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဌ)အထိ ပါရှိသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေး ကူညီမှု ၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။
၂၈။ (က) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသည် သင်္ဘောများ၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် သင်္ဘောဆိုက်ကပ် ရပ်နားရေးအတွက် လွယ်ကူအဆင်ပြေရန် စီမံထားရှိသော အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းကိရိယာများအား ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ထိပါးတိုက်ခိုက်မှု များအား ကာကွယ် ရေး၊ အကူအညီတောင်းခံရေး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးတို့အတွက် အထူးသတိရှိစေရန် လုံခြုံရေးအဆင့်သတ်မှတ်၍ လိုအပ်သော အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် သတင်း အချက်အလက်များ ပေးပို့ဖလှယ်ကြရန် သက်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောပိုင်ရှင်၊ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် သင်္ဘောကုမ္ပဏီများ၊ ရေယာဉ်မှူးများနှင့် ဆိပ်ကမ်းကိုယ်စားလှယ်များအား ညွှန်ကြားရမည်။
(ခ) သင်္ဘောကုမ္ပဏီများသည် ဤအခန်းပါ သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို လည်းကောင်း၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာသင်္ဘောနှင့်ဆိပ်ကမ်းများ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးနှင့် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ လုံခြုံရေးဥပဒေပါ လမ်းညွှန်ချက်များကို လည်းကောင်း အလေးထား၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) ရေယာဉ်မှူးသည် နိုင်ငံတော်၏ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုကို ဝင်ရောက်ဆိုက်ကပ်ခြင်း မပြုမီသော် လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ပင်လယ်ပြင်၌ အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခု၏ဆိပ်ကမ်းတွင်ရှိနေလျှင် သော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားသည့် လုံခြုံမှုအဆင့်အလိုက် လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
(က) သင်္ဘောများအား ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ထိပါးတိုက်ခိုက်မှုများ၏ အန္တရာယ်မှကင်းဝေးစေရန် လိုအပ်သော ကာကွယ်တားဆီးမှုများနှင့် နှိမ်နင်းမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
(ခ) သင်္ဘော၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် လုံခြုံမှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်လျှင် ကုန်စည်၊ ကုန်သေတ္တာ သို့မဟုတ် အခြားအလုံပိတ်ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် သင်္ဘောပေါ် အတင်အချပြုလုပ်မှုကို ငြင်းဆိုခြင်း အပါအဝင် ရေယာဉ်မှူး၏ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး အတွေ့အကြုံကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်၍ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ကို သင်္ဘောကုမ္ပဏီ၊ သင်္ဘောစင်းလုံးငှားရမ်းသူ သို့မဟုတ် အခြားသူတို့က တားဆီးချုပ်ချယ်ခွင့် မရှိစေရ။
၃၀။ (က) ရေယာဉ်မှူးသည် ဤအခန်းပါ အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သည်ဟု ယုံကြည်ရ သူအား မိမိသင်္ဘောမှတ်ပုံတင်ထားသော နိုင်ငံ၏ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူထံသို့ လည်း ကောင်း၊ ဆိုက်ရောက်ရာ နိုင်ငံ၏ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူထံသို့ လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်သမျှ ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီး အတည်ပြုချက်ရယူလျက် သက်သေခံအထောက် အထားများနှင့်အတူ ဆိုက်ရောက်ရာနိုင်ငံ၏ ရဲတပ်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူထံသို့ လွှဲအပ်နိုင်သည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လွှဲအပ်သည့် အကြမ်းဖက်သမားအား လက်ခံရရှိသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူသည် ထိုအကြမ်းဖက်သမားအား ဤဥပဒေအခန်း (၁၆) ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။
၃၁။ ဤအခန်းပါ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ဥပဒေနှင့် မညီဘဲ တမင်ပြု လုပ်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည်-
(က) ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဋ) ပါသင်္ဘောများနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။
(ခ) နိုင်ငံတော်၏ပိုင်နက် ပင်လယ်နယ်နိမိတ်အတွင်း တွေ့ရှိရသော ပုဒ်မ ၂၇ ပါ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရသူနှင့်လည်း သက်ဆိုင်စေရမည်။
၃၂။ ဤအခန်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အောက်ပါသင်္ဘောများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ-
(ခ) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည့် ရေတပ်အကူအဖြစ်သုံးသော သင်္ဘော သို့မဟုတ် အကောက်ခွန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်ဖြစ်စေ သုံးသော သင်္ဘော၊
(ဂ)ရေကြောင်းသွားလာခြင်းမှ ရုပ်သိမ်းထားသည့် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရပ်နားထားသည့် သင်္ဘော၊
(ဃ) စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြေးဆွဲခြင်းမဟုတ်ဘဲ အစိုးရက ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည့် သင်္ဘောများနှင့် အစိုးရကိစ္စအတွက်သာ အသုံးပြု သည့်အခြား သင်္ဘောများ။
ရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေးအဆောက်အအုံကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ဥပဒေမဲ့ပြုလုပ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်း
၃၃။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုကို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်ပါက ရေအောက်သယံဇာတ ရှာဖွေရေး အဆောက်အအုံကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ဥပဒေမဲ့ပြုလုပ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှု မြောက်သည်-
(က) အင်အားသုံး၍ ဖြစ်စေ၊ ခြိမ်းခြောက်၍ဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ကြောက်ရွံ့အောင် ပြုလုပ်၍ဖြစ်စေ ရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေးအဆောက်အအုံကို ဖမ်းဆီးသိမ်းပိုက်မှု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်၍ အသုံးချဆောင်ရွက်မှု၊
(ခ) ရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေးအဆောက်အအုံကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် ထိုအဆောက်အအုံ ပေါ်ရှိသူကို အတင်းအဓမ္မပြုလုပ်မှု၊
(ဂ) ရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေးအဆောက်အအုံကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် ထိုအဆောက်အအုံကို ဖျက်ဆီးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေမှု၊
(ဃ) ရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေးအဆောက်အအုံ ပျက်စီးစေရန် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေ ရန် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဖျက်ဆီးရေးပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုကို ထိုအဆောက် အအုံပေါ်တွင် ချထားမှု သို့မဟုတ် ချထားစေမှု၊
(င) သူတစ်ဦးဦးကို သေစေရန်၊ အပြင်းအထန်နာကျင်စေရန် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးစေ ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေးအဆောက်အအုံကိုဖြစ်စေ၊ ထိုအဆောက်အအုံ ပေါ်တွင် ဖြစ်စေ၊ ထိုအဆောက်အအုံမှ ဖြစ်စေ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဒြပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ အခြားဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထု၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်မှု၊
(စ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (င) အထိပါရှိသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် စည်းကမ်း ချက်ထား၍ဖြစ်စေ ၊ မထားဘဲဖြစ်စေ အများပြည်သူကို ခြိမ်းခြောက်မှု၊ သူတစ်ဦးဦးကို ဒဏ်ရာရစေမှု သို့မဟုတ်သေစေမှု၊
(ဆ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (စ) အထိ ပါရှိသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေး ကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု။
၃၄။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသည် ရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေးအဆောက်အအုံကိုဖြစ်စေ၊ ထိုအဆောက်အအုံပေါ်မှဖြစ်စေ ပုဒ်မ ၃၃ ပါပြစ်မှုတစ်ခုခုကို နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက် ပင်လယ်နယ်နိမိတ် တွင်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းတွင်သော်လည်းကောင်း မည်သူမျှ ပြစ်မှုကျူးလွန် နိုင်ခြင်းမရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးနှင့် အရေးယူဆောင် ရွက်ရေးတို့အတွက် အစီအမံများ ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ကို ပြုရမည်။
စုံစမ်းထောက်လှမ်းရှာဖွေရေးအတွက် အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အမှတ်အသားပြုလုပ်မထားသည့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်း
(က) ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရှာဖွေရေးအတွက် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပလတ်စတစ် ဝတ္ထုပစ္စည်းများ အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင် ရွက်ခြင်း မပြုသည့်အပြင် မည်သည့်ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်း ပါဝင်ကြောင်း မှတ်သားထား ခြင်းမရှိသည့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းကို နိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းဖြစ်စေ၊ နယ်နိမိတ်ပြင် ပသို့ဖြစ်စေ အခွင့်ရအာဏာပိုင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ တင်သွင်းမှု၊ တင်ပို့မှု၊ ဖြတ်သန်း သယ်ယူပို့ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဆိုက်ကပ်ရပ်နားမှုပြုလုပ်ပါက ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပလတ်စတစ် ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာပြစ်မှု မြောက်သည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုပြုပါက အဆိုပါပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ရာ ရောက်သည်။
၃၆။ ပုဒ်မ ၃၅ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသည့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတော်က လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းထားသော တာဝန်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်သူ၏ ကြီးကြပ်မှုအရ တပ်မတော်ကဖြစ်စေ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖြစ်စေ လုပ်ငန်း တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။
၃၇။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီသည် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးနှင့် အရေးယူဆောင် ရွက်ရေး တို့အတွက် အစီအမံများ ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် ကြီးကြပ် ခြင်းတို့ပြုရမည်။
၃၈။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် တပ်မတော်မှ အာဏာပိုင်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများသည်-
(က) တပ်မတော် သို့မဟုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ လက်နက်တိုက်တွင် ပြည်ပမှတင်သွင်းသော သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်အတွင်း ထုတ်လုပ်သော သို့မဟုတ် ရှိပြီးဖြစ်သော အမှတ်အသားမပြုလုပ်ရသေးသည့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးရေးအတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများချမှတ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါဝတ္ထုပစ္စည်းများကို လက်ဝယ်ထားခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကို ထိရောက်စွာ ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းများ ပြုရမည်။
(ခ) ဤအခန်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးမဝင်သော ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် ဝတ္ထုပစ္စည်းများအား ဖြစ်နိုင်သမျှဆောလျင်စွာဖျက်ဆီးရမည်။
၃၉။ မည်သူမဆို သေစေရန် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန်နာကျင်စေရန်သော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားစွာဖြစ်စေရန်သော်လည်းကောင်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျက်စီးစေရန်သော် လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်ကျူးလွန်လျှင် အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှု မြောက်သည်-
(က) အများပြည်သူ အသုံးပြုသည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်စက်ပစ္စည်း ကိရိယာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေ၊ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် သို့မဟုတ် အခြေခံအဆောက်အအုံပစ္စည်းတစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုပေးအပ်မှု၊ ချထားမှု၊ စွန့်ပစ်မှု သို့မဟုတ် ဖောက်ခွဲမှု သို့မဟုတ် ယင်းတို့ကို ဖျက်ဆီးမှု၊
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ၌ ပါရှိသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှု၊ အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊
(ဂ) အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ရန် သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်ရာ တွင် အားပေးကူညီရန် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ဗုံး သို့မဟုတ် လက်နက်ကို ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ရောင်းချမှု၊ ပေးကမ်းမှု သို့မဟုတ် လက်ဝယ်ထားမှု။
၄၀။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသည် အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများမဖြစ်ပွား စေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက် အစီအမံများ ချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ပြုရမည်။
အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်း
၄၁။ မည်သူမဆိုအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခု ကျူးလွန်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ကျူးလွန်ရန်ဖြစ်စေ ယင်းပြစ်မှု ဖြစ်မြောက်အောင် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အလို့ငှာ အောက်ပါတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်လျှင်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ရာရောက်သည်-
(က) တရားဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ယင်းနည်းလမ်း နှစ်မျိုးလုံးဖြင့်ဖြစ်စေ ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို အကြမ်းဖက်သမား တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုက အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြု မည်ဟု သိရှိလျက်နှင့်သော်လည်းကောင်း ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် တမင်ကောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း၊
(ခ) ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို အကြမ်းဖက် သမားတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြု မည်ဟုသိနိုင်ရန် အကြောင်းရှိလျက်နှင့်သော်လည်းကောင်း ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊
(ဂ) အကြမ်းဖက်အုပ်စုကဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်သမားကဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့၏ကိုယ်စား အခြားသူ တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ သိုမှီးထားသည့်၊ ထိန်းသိမ်းထားသည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ သိနိုင်ရန်အကြောင်းရှိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ ယင်းပစ္စည်းကို ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ပြည်ပသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသူ၏အမည်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်း၊
(ဃ) အထက် ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တို့ပါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုပြုခြင်း၊ စည်းရုံးခြင်း၊ ပေးကမ်းထောက်ပံ့ခြင်း၊ အခြားသူများကို ညွှန်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် ထိုပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရာတွင် ကြံရာပါအဖြစ် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၄၂။ မည်သူမဆို သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ သိရန်အကြောင်းရှိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ အောက်ပါတစ်ခုခုကို ပြုလုပ် လျှင်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ရာရောက်သည်-
(က) မည်သည့် အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်းကိုမဆို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရောင်းဝယ်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း၊
(ခ) အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်း ပါဝင်ပတ်သက်သည့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ရာတွင် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပါဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြစ်မြောက်အောင် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဂ) အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုအတွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏စီမံညွှန်ကြားမှု အရ အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်း ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အခြားသက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း၊
(ဃ) အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်းဟု သိရှိသောပစ္စည်းကို မိမိလက်ဝယ်ထားရှိခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေခြင်း၊
(င) အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းနှင့် အကြမ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်းများကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက်များကို ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ဖြစ်စေ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးထံသို့ဖြစ်စေ ခိုင်လုံသည့်အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ ဖွင့်ဟပြောဆိုရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(စ) အကြမ်းဖက်သမားရှိကြောင်းနှင့် အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းရှိကြောင်း၊ ယင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်း သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တော့မည်ဟု ယုံကြည်ရကြောင်းကို သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
၄၃။ (က) မည်သူမဆို အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်းကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လျှင်၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းလျှင် သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းရန် အားထုတ် လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဗဟိုအဖွဲ့ နှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ဖြစ်စေ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးထံသို့ဖြစ်စေ ခိုင်လုံသည့် အကြောင်း ပြချက်မရှိဘဲ ဖွင့်ဟပြောဆိုရန် ပျက်ကွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှု ကျူးလွန်ရာရောက်သည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်သမားပိုင်ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို သဘောရိုးဖြင့် ဖွင့်ဟပြောဆိုသည့် သူတစ်ဦးဦးအား တရားမကြောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှုကြောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုရ။
၄၄။ ဤအခန်းပါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခု မပေါ်ပေါက်စေကာမူ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်မှုမပြုစေကာမူ သို့မဟုတ် ကောက်ခံရရှိသောရန်ပုံငွေကို အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရာတွင် အမှန်တကယ် မသုံးစွဲစေကာမူ သို့မဟုတ် ကောက်ခံထားသော သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ ပေးသောရန်ပုံငွေသည် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တစ်ခုခုနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိစေကာမူ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ဤသို့ဆိုရာတွင် မည်သည့်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နယ်မြေအတွင်း အကြမ်းဖက် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန် ကြံရွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ဖြစ်ပွားခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက် အုပ်စု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်သမားသည် ဤအခန်းပါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သူ တစ်ဦးဦးနှင့် နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နယ်မြေတစ်ခုအတွင်း အတူတကွ သို့မဟုတ် ခြားနားသောနိုင်ငံ သို့မဟုတ် နယ်မြေများတွင် သီးခြားစီတည်ရှိနေခြင်းကိုသော်လည်းကောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုရ။
၄၅။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသည် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက် အစီအမံများ ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ကို ပြုရမည်။
၄၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် အောက်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ထုတ်ဆင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့သော အမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကို ထုတ်ဆင့်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီအား လွှဲအပ်တာဝန်ပေးခြင်းပြုနိုင်သည်-
(က) အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားသည့် ပစ္စည်းများကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်းတို့ မပြုနိုင်စေရေး အတွက် တားမြစ်မိန့်၊ ချိပ်ပိတ်အမိန့်နှင့် ထိုအမိန့်တို့ကို ရုပ်သိမ်းသည့်အမိန့်၊
(ခ) သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ထုတ်ဆင့်ထားသော ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းနှင့် အကျိုး အမြတ်များမှာ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၌ အပ်နှံထားခြင်းဖြစ်ပါက ထိုသက်သေခံ ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခွင့်၊ သက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများစစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်နှင့် လိုအပ်ပါက သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခွင့်ပြုရန် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိသူများထံ ထုတ်ဆင့်သည့်အမိန့်။
(က) အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ်မရည်ရွယ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ၏ရန်ပုံငွေများနှင့်ပစ္စည်းများကို အကြမ်းဖက်အုပ်စုများနှင့် အကြမ်းဖက်သမားများထံ မရောက်ရှိစေရေး အတွက်လည်းကောင်း၊ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် အသွင်ယူကာ အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုတို့က ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်စေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက် သမားနှင့် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် လမ်းကြောင်းအဖြစ် အသုံးမပြု နိုင်စေရေးအတွက်လည်းကောင်း လိုအပ်သော စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရေးယူမှု အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်းများပြုနိုင်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် တားဆီး နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့များသို့ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ကို ပြုရမည်။
(ခ) အကြမ်းဖက်သမားပိုင် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင်ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းနှင့်ရန်ပုံ ငွေများထိန်းချုပ်ရေး၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရေး၊ သက်သေခံပစ္စည်းသိမ်းဆည်းရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် တရားစွဲတင်နိုင်ရေး တို့အတွက် လိုအပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ဖြစ်စေ၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဖြစ်စေ တာဝန်ပေးအပ်၍ ဆောင်ရွက်စေရမည်။
(ဂ) အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ရန် ထောက်ပံ့သော အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှု တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရာမှရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း အသုံးပြု၍ ဘဏ်နှင့်ငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်စေရန် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများအားလည်းကောင်း၊ သက်သေ ခံငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးအတွက် တရားစွဲဆိုတင်ပို့ရန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လိုအပ်သလို စီစဉ်ညွှန်ကြားရမည်။
(င) နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူအပေါ်ရုတ်ခြည်းအန္တရာယ်ကျရောက်စေမည့် အကြမ်းဖက်မှုများအား တားဆီးကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါက အကြမ်းဖက်အုပ်စုများနှင့် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အီလက် ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများကို ဖြတ်တောက်ခွင့်၊ ကန့်သတ်ခွင့်၊ ကြားဖြတ်ဖမ်းယူခွင့်အမိန့် တို့ကို ဗဟိုအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ဆင့်နိုင်သည်။
၄၈။ ဤဥပဒေအရ လုပ်ငန်းတာဝန်ပေးထားသော တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုအဖွဲ့ကဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီကဖြစ်စေ ပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရာ တွင် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် မဆန့်ကျင်သမျှ တည်ဆဲ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၄၉။ မည်သူမဆိုအောက်ပါအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်မှ အများဆုံးထောင်ဒဏ်တစ်သက်အထိဖြစ်စေ၊ သေဒဏ် ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်-
(က) ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၁)နှင့် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၂) တို့တွင်ပါရှိသော ပြုလုပ်မှုများ၊
(ခ) ပုဒ်မ ၇ ပါလေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် လေယာဉ်ပေါ်တွင် ကျူးလွန် သည့်ပြစ်မှု၊
(ဂ) ပုဒ်မ ၈ ပါလေယာဉ်ကို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင်သိမ်းပိုက်မှု၊
(ဃ) ပုဒ်မ ၉ ပါမြို့ပြလေကြောင်းပျံသန်းရေးအား ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင် ပြုလုပ်မှု၊
(င) ပုဒ်မ ၁၀ ပါမြို့ပြလေကြောင်းပျံသန်းရေးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လေဆိပ်တွင် ဥပဒေနှင့် မညီဘဲ အတင်းအဓမ္မပြုလုပ်မှု။
၅၀။ မည်သူမဆိုအောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူ ကိုအနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်မှ အများဆုံးထောင်ဒဏ်တစ်သက်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်-
(က) ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၀)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၃)နှင့် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၄)တို့တွင် ပါရှိသော ပြုလုပ်မှုများ၊
(ခ) ပုဒ်မ ၁၇ ပါ ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှု၊
(ဂ) ပုဒ်မ ၁၉ ပါ နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ အခြားရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီး ယား လက်နက်ဆိုင်ရာပြစ်မှု၊
(ဃ) ပုဒ်မ ၂၀ ပါ နျူကလီးယားအဆောက်အအုံဆိုင်ရာပြစ်မှု၊
(င) ပုဒ်မ ၂၃ ပါ နျူကလီးယားဒြပ်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းနှင့် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (တ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ နျူကလီးယားအဆောက်အအုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာပြစ်မှု၊
(စ) ပုဒ်မ ၂၄ ပါ နျူကလီးယားအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှု၊
(ဆ) ပုဒ်မ ၂၇ ပါ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ တမင် ပြုလုပ်မှု၊
(ဇ) ပုဒ်မ ၃၃ ပါရေအောက်သယံဇာတရှာဖွေရေးအဆောက်အအုံအား ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ဥပဒေ နှင့်မညီဘဲ တမင်ပြုလုပ်မှု၊
(ဈ) ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်ပုဒ်မခွဲ (ခ)ပါ အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှု၊
(ည) ပုဒ်မ ၄၁ နှင့် ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)အထိ ပါရှိသော အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှု။
၅၁။ မည်သူမဆိုအောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူ ကိုအနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်မှ အများဆုံး ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ် လည်းချမှတ်နိုင်သည်-
(က) ပုဒ်မ ၁၅ ပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှု၊
(ခ) ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပလတ်စတစ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာပြစ်မှု၊
(ဂ) ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)ပါ အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်ရန် သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်ရာတွင် အားပေးကူညီရန် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ဗုံး သို့မဟုတ် လက်နက်ကို ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ရောင်းချမှု၊ ပေးကမ်းမှု သို့မဟုတ် လက်ဝယ်ထားမှု။
၅၂။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုအနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်မှ အများဆုံးထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်-
(က) ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၆) မှ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၈) အထိပါရှိသော ပြုလုပ်မှု၊
(ခ) ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (င) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (စ) တို့တွင်ပါရှိသော အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာပြစ်မှု၊
(ဂ) ပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ခိုင်လုံသည့် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဖွင့်ဟပြောဆိုရန် ပျက်ကွက်မှု။
၅၃။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်မှ အများဆုံးထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။
၅၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မ ၅၀ နှင့်ပုဒ်မ ၅၁ တို့တွင် ဖော်ပြထားသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန် ရာ၌သူတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ အများကိုဖြစ်စေ သေစေလျှင် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန်နာကျင် စေလျှင် ထိုသူကိုအနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်မှ အများဆုံး ထောင်ဒဏ်တစ်သက်အထိဖြစ်စေ၊ သေဒဏ် ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၅၅။ အကြမ်းဖက်ပြစ်မှုတစ်ခုခုဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသူသည် ယခင်ကလည်း အကြမ်းဖက် ပြစ်မှု တစ်ခုခုဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ရလျှင် ထပ်မံကျူးလွန်သော အကြမ်းဖက်မှုအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထား သောအများဆုံးပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၅၆။ တရားရုံးသည် အကြမ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လျှင် သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားသော ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံ တော်ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်းပြုသည့်အမိန့်ချမှတ် ရမည်။
၅၇။ ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီများသည် အောက်ပါကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် သင့်လျော် သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံများနှင့်လည်းကောင်း ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာသတင်း ဖလှယ်ခြင်း၊
(ခ) အကြမ်းဖက်သမားက မိမိနယ်မြေအား အသုံးပြု၍ အခြားနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ်အကြမ်း ဖက်မှုကျူးလွန်ခြင်း မပြုနိုင်အောင်ကာကွယ်တားဆီးခြင်း၊
(ဂ) အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ စီစဉ်ညွှန်ကြားခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စီမံခြင်းနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်တားဆီးခြင်း၊
(ဃ) အကြမ်းဖက်သမားများနှင့် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်၍ဖြစ်စေ၊ နယ်စပ်ဖြတ် ကျော်၍ဖြစ်စေ လှုပ်ရှားသွားလာမှုကို ထိန်းချုပ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် နယ်စပ်ဒေသထိန်းချုပ်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ခြင်း၊
(င) အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေး၊ နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) ဒေသအတွင်း ဗဟိုသတင်းအချက်အလက်ဌာန ထူထောင်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးတွင် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် စွမ်းရည် မြှင့် တင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ) အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက် ခြင်း။
၅၈။ အကြမ်းဖက်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဝင် နိုင်ငံများ နှင့်လည်းကောင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်လည်းကောင်း နိုင်ငံအချင်းချင်း အကူအညီပေးရေး နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံအချင်းချင်း အကူအညီပေးရေးဥပဒေ နှင့်အညီဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(က) ဤဥပဒေပါ အကြမ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှု တစ်ခုခုကို တရားခံလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည့် ပြစ်မှုဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပြီး တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများတွင် ဖော်ပြ ထားသည့် တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ပါအတိုင်း တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆို ခံရသည့် နိုင်ငံ၏ဥပဒေဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အခြားစည်းကမ်းချက်များကို အထောက်အထား ပြု၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) ဗဟိုအဖွဲ့၏လမ်းညွှန်ချက်အရ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီများနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများသည် အကြမ်းဖက်သမား တရားခံကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းကိစ္စ များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သလို စီစဉ်ဆောင်ရွက်စေရမည်။
၆၀။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်ခုခုမှဖြစ်စေ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခုမှဖြစ်စေ ဤဥပဒေပါ အကြမ်းဖက်ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံတော်အတွင်း၌ ကျူးလွန်သည့် တရားခံကို ပြည်ပသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန်နှင့် ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင် အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံချက်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍-
(က) ဤဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သည့် အကြမ်းဖက်မှုများကို နိုင်ငံရေးပြစ်မှု၊ ယင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်ပြစ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုဟု မှတ်ယူခြင်းမပြုရ၊
(ခ) ယင်းမေတ္တာရပ်ခံချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ကျူးလွန်ခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုမှာ နိုင်ငံရေးပြစ်မှု၊ ယင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်ပြစ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုဟူသော အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် ငြင်းပယ်ခြင်းမပြုရ။
၆၁။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ အကြမ်းဖက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အရေးယူခြင်းတို့ဆောင်ရွက် ရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေနှင့် လိုက်လျောညီသည့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ တရားမျှတစွာ ပြုမူဆက်ဆံရေးနှင့် အခြားခံစားခွင့်အခွင့်အရေးများ ရရှိစေရေးတို့အတွက် အာမခံ ချက်ရရှိစေရမည်။
၆၂။ မည်သူမဆို အကြမ်းဖက်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရပြီး ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရလျှင် ယင်း၏အခွင့်အရေးများ ရရှိရေးအတွက် ထိုသူ၏နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားသည့် နိုင်ငံမှအနီးစပ်ဆုံး သင့်လျော်ရာသံရုံးသို့ ဖြစ်စေ၊ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ဖြစ်စေ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းမရှိစေဘဲ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ရန် အခွင့်အရေးရရှိစေရမည်။
၆၃။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေကို အောက်ပါရငွေ နှင့် ပစ္စည်းများဖြင့်ထူထောင်နိုင်သည်-
(က) တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ထောက်ပံ့ငွေ၊
(ခ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ယင်း၏ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေသို့ ဤဥပ ဒေပါပြစ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဇယား (၅)၊ အမှတ်စဉ် ၉ အရ ပေးသွင်းသည့် ငွေကြေးများအနက်မှ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်မနည်းသော ထောက်ပံ့ငွေ၊
(ဂ) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ စေတနာရှင်များ၏ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေနှင့် ပစ္စည်းများ။
၆၄။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေကို အောက်ပါကိစ္စ များအတွက် အသုံးပြုရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကျခံရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်-
(က) ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များ၊
(ခ) အကြမ်းဖက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် တားဆီးရေးတို့အတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများချမှတ် ဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စများ၊
(ဂ) အကြမ်းဖက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်မှုများနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စများ၊
(ဃ) အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ဘေးဒဏ်သင့်သူများကို သင့်လျော်သော ကူညီထောက်ပံ့မှုများ၊
(င) အကြမ်းဖက်သမားများကို ခံယူချက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စများ၊
(စ) အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စများ၊
(ဆ) ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်သော အခြားလိုအပ်သည့်ကိစ္စများနှင့် အခြားအရေးပေါ် လုပ်ငန်းတာဝန် များဆောင်ရွက်ရာ၌ ကုန်ကျစရိတ်များ။
၆၅။ အကြမ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူမဟုတ်ဘဲ အခြားသူတစ်ဦးဦးက ထိုငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို သဘောရိုးဖြင့် အဖိုးစားနားပေး၍ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းရယူထားပြီး လက်ဝယ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေထင်ရှားတင်ပြနိုင်ပါက ထိုသူ၏အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမရှိစေရ။
၆၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် လူ့အခွင့်အရေးအရ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုသို့ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလာသူမှာ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း ရှိ မရှိနှင့် ထိုအကြမ်းဖက်မှုကို ကျူးလွန်ရန်အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကျူးလွန်ခြင်း ရှိ မရှိတို့ကို သေချာစွာ စိစစ်စေပြီး အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ ထိုအကြမ်းဖက်မှုကို ကျူးလွန်ရန် အားပေးကူညီမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းကိုသော်လည်းကောင်း တွေ့ရှိပါက ထိုသူကို ဤဥပဒေအရ ထိုက်သင့်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်။
၆၇။ ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ထားသော အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သက်သေခံ ပစ္စည်းသည် တရားရုံးရှေ့သို့ တင်ပို့ရန် မလွယ်ကူသောပစ္စည်းဖြစ်ပါက ယင်းသက်သေခံပစ္စည်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ တင်ပို့ရန်မလိုဘဲ မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း အစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြနိုင်သည်။ ယင်းသို့တင်ပြခြင်းကို တရား ရုံးရှေ့သို့ သက်သေခံပစ္စည်းတင်ပြဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲသည့်အမိန့် ချမှတ်ရမည်။
၆၈။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားသော လုပ်ငန်းကော်မတီ များနှင့် အဖွဲ့များ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် လိုအပ်သောရုံး အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ ရုံးဝန်ထမ်းများကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရမည်။
၆၉။ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင် ပါရှိစေကာမူ အကြမ်းဖက်မှုများကို ဤဥပဒေဖြင့်သာ အရေးယူရမည်။
၇၀။ အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုဖြင့် တရားစွဲဆိုရာတွင် ဗဟိုအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ဗဟိုအဖွဲ့က လွှဲအပ်ပေးထား သောအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။
၇၁။ ဤဥပဒေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့်သူတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအပေါ် ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သဘောရိုး ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် မည်သည့်တရားရုံးတွင်မျှ တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိစေရ။
၇၂။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် –
(က) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများသည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ဂ) လုပ်ငန်းကော်မတီသည် လိုအပ်သော အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ဗဟိုအဖွဲ့၏ သဘောတူ ညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(The Pyidaungsu Hluttaw Law No.23, 2014)
7th Waxing of Nayon, 1376 M.E.
(4 June, 2014)
Title, Jurisdiction and Definition
This Law shall be called the Counter Terrorism Law.
This Law shall have jurisdiction upon the persons who commit, attempt to commit, abet or, instigate or participate as accomplices the following acts of terrorism:
(a) an act of terrorism committed by any person within the territory of the State;
(b) an act of terrorism committed beyond the limit of the country byaMyanmar citizen orapermanent resident foreigner in the State or against any of them;
(c) acts which cause damage and loss to the public security or life and property of the public or important infrastructure facilities for the public or private or the State-owned facilities, conveyance, machinery and equipment;
(d) financing amounted to abetment of any terrorist or any terrorist group who commits or is likely to commit an act of terrorism;
(e) an act of terrorism committed against the State-owned facility, conveyance, machinery and equipment or diplomatic offices including embassy and consulate of the State existed abroad;
(f) an act of terrorism committed onavessel, an aircraft and any other vehicle which has been registered in the State under any existing law;
(g) an act of terrorism committed onavessel or an aircraft or any other vehicle which is operated or leased from domestic or abroad with or without crew byaMyanmar citizen orapermanent resident foreigner in the Union of Myanmar or any organization or association owned by them;
(h) an act of terrorism committed by the alleged offender who is present in the territory of the State and whenarequest for extradition had not been granted to the respective foreign State;
(i) acts of terrorism committed to the State or other countries based within the State;
(j) acts of terrorism committed on land, sea, air space, territory and continental shelf of the State;
(k) an act of terrorism committed by or against vessels navigating from any place of the State to any other place existed within the State through the outer territorial sea of the State or vessels navigating according to their schedule or vessels navigating beyond the territory of the State in the adjoining borderline of the neighbouring countries which are adjacent to the State.
The expressions contained in this Law shall have the meanings given hereunder:
(a) State means the Republic of the Union of Myanmar.
(b) Act of terrorism means an act or omission to act any of the following offences with the intent to commit an act of terrorism:
(i) an unlawful offence with the intent against civil aviation and airport provided in Chapter IV;
(ii) an act against internationally protected persons including representatives provided in Chapter V;
(iii) an act against the taking of hostages provided in Chapter VI;
(iv) an offence against nuclear materials, radioactive materials and nuclear facilities provided in Chapter VII;
(v) an unlawful offence with the intent against the safety of maritime navigation provided in Chapter VIII;
(vi) an unlawful offence with the intent against the safety of fixed platforms in the continental shelf provided in Chapter IX;
(vii) an offence against unmarked explosives provided in Chapter X;
(viii) an offence against terrorist bombing provided in Chapter XI;
(ix) an offence against financing and providing material of terrorism provided in Chapter XII;
(x) acts which cause serious damage and loss to the public security or life and property of the public or the important infrastructure facilities for the public or individual or State-owned facilities, conveyance, machinery and equipment;
(xi) act of terrorism committed against the State or government owned facilities, conveyance, machinery and equipment or diplomatic offices including embassy and consulate of the State existed abroad;
(xii) acts to produce ,transfer, maintain, provide or offer to provide the weapon and ammunitions, biological, chemical and nuclear weapons or explosive weapons, nuclear material toaterritorist or member of any terrorist group;
(xiii) acts which cause death or serious injury toacivilian or any other person not participating at hostilities in the situation of armed conflict with the intent to cause fear in the public, to force Government or any internal and international organization to do unlawful act or to refrain from doing lawful act, and other acts;
(xiv) acts of territorism which cause serious damage to the health or safety of the public or the environment with the intent to terrorize;
(xv) acts of exhortation, persuasion, propaganda, recruitment of any person to participate in any terrorist group or activities of terrorism;
(xvi) acts to organizeaterrorist group, to participate in any terrorist group knowingly and to operate by assigning;
(xvii) acts of concealing or harbouring knowingly or granting to hide or granting to stay temporarily or hiding not to be taken action or to be escapedaterrorist or member of any terrorist group;
(xviii) acts of giving permission to use, to assemble in, to hold meeting in any building and place, to train on an act of terrorism or to arrange transportation toaterrorist or member of any terrorist group;
(c) Fixed platform means an artificial island installed and structured permanently attached to the sea-bed for the purpose of exploration or exploitation of resources or for other economic purposes in continental shelf of the State.
(d) Assets owned byaTerrorist Group means profits obtained from the commission of an act of terrorism, money and assets which are used or being used or presumed to be used in the commission of an act of terrorism, money and assets which are used or being used or presumed to be used byaterrorist oraterrorist group, money and assets which are possessed or controlled byaterrorist oraterrorist group or any other person on behalf of such group, money and assets which are collected with the intent to provideaterrorist group or to provide fund to an act of terrorism and money and profits derived from such money and assets.
(e) Aircraft in service means the period of service from the beginning of the preflight preparation by the crew until twenty four hours after landing. In this expression, the period of service being given throughout the flight is also included.
(f) Infrastructure facility means facilities such as water, sewage, energy, fuel, road, railway, water way, bridge, airport or transportation and communication used or occupied or provided or distributed publicly or privately for the interest of the public.
(g) State -owned facilities, conveyance, machinery and equipment means facilities resided temporarily or permanently or conveyance, machinery and equipment being used for representatives of the State, members of Government, members of the legislature or the judiciary, officials and staff of the State or official and staff of government organizations or intergovernmental organizations in connection with their official duties.
(h) Internationally Protected Person means any of the following persons in the State from any foreign country arrived at any time:
(i) the Head of State under the Constitution of the respective State, member of the body performing the functions ofaHead of State, the Head of Government oraMinister for Foreign Affairs and diplomats;
(ii) family members accompanying the person contained in clause (i);
(iii)arepresentative or any official ofaState or an official or other representative of any international organization of an intergovernmental character including diplomatic representatives who are entitled pursuant to international law to special protection.
(i) Biological, Chemical and Nuclear Weapon meansabiological weapon, chemical weapon and nuclear weapon;
(j) Biological Weapon means any of the following equipments:
(i) microbiological or other biological agents and toxins whatever their origin or types and in quantities of their method of production which have no justification for prophylactic, protective or other peaceful purposes; or
(ii) weapons, equipment or agents designed to use such microbiological or other biological agents or toxins for hostile purposes or armed conflict.
(k) Chemical Weapon means the following toxic chemicals and munitions whether being together or separate, the said chemical weapons:
(i) toxic chemicals which are not intended to use for industrial, agricultural, research, medical or other peaceful purposes or direct protection against toxic chemicals and chemical weapons or military-affairs in which toxic chemicals be used or suppression of internal riot;
(ii) munitions and devices specifically designed to cause death or harm by the toxic chemicals specified in clause (i);
(iii) other equipment specifically designed foradirect use of the munitions and devices specified in clause (ii).
(l) Nuclear Weapon meansaweapon containing nuclear materials defined in article 1 (a) and (b) of Chapter I of the convention on the Physical Protection of Nuclear Materials, 1980 compiled by the International Atomic Energy Agency.
(m) Device means any nuclear explosive device or any radioactive material dispersal or radiation-emitting device which may, owing to its radiological properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment.
(n) Nuclear material means plutonium, except that with isotopic concentration exceeding 80 per cent in plutonium -238, uranium -233, uranium enriched in the isotope -235 or 233, uranium containing the mixture of isotopes as occurring in nature other than in the form of ore or ore residue, any material containing one or more of the foregoing.
(o) Radioactive material means nuclear material and radioactive substances which contain nuclei which undergo spontaneous disintegration (a process accompanied by emission of one or more types of ionizing radiation, such as alpha, beta, neutron particles and gamma rays) and materials which may owing to their radiological or fissile properties, cause death, serous bodily injury or substantial damage to property or to the environment.
(p) Nuclear Facility includes the followings:
(i) nuclear reactors including reactors installed on vessels, vehicles, aircraft or space objects for use as an energy source in order to propel such vessels, vehicles, aircraft or space objects or for any other purpose;
(ii) any plant, workshop, storehouse or machinery being used for the production, storage, processing or transport of radioactive material;
(iii) buildings in which nuclear material is produced, processed, used, handled, stored or disposed orabuilding attached with machineries. A building which may emit significant amount of radiation or radioactive material if such building is destroyed or interferred.
(q) International Nuclear Transport means the carriage ofaconsignment of nuclear material by any means of transportation intended to go beyond the territory of the State where the shipment originates beginning with the departure from any facility of the shipper of that State and ending with the arrival at any facility of the receiver within the State of ultimate destination.
(r) Explosive device means any of the following devices:
(i) an explosive or incendiary weapon or device that is designed or has the capability to cause death or serious injury to any person or substantial material damage;
(ii)aweapon or device that is designed or has the capability to cause death or serious injury to any person or substantial material damage through the release, dissemination or impact of toxic chemicals, biological agents or toxins or similar substances or radiation or radioactive materials;
(s) Plastic Explosive means plastic substance in flexible or elastic sheet form. In this expression, any other substance specified by the rules issued under this law as plastic explosive in accord with the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection is also included.
(t) Ship meansavessel of any type whatsoever not permanently attached to the sea-bed including dynamically supported craft, submersibles or any other floating craft. In this expression mobile offshore drilling units and high-speed hovercraft are also included.
(u) Terrorist means any person who commits or attempts to commit unlawfully any act of terrorism by any means directly or indirectly, or participates as an accomplice in an act of terrorism or directs or organizes others to commit an act of terrorism or intentionally contributes to commit an act of terrorism.
(v) Terrorist group meansagroup of two or more persons formed takingaperiod of time to commit an act of terrorism. In this expression,agroup of terrorist declared under the resolution of United Nations Security Council or by the Central Body with the approval of the Union Government is also included.
Instigation means an act of noticeable or unnoticeable, direct or indirect distribution, advocating or otherwise makingamessage or information with the intent to instigate the commission of any act of terrorism.
(x) Imprisonment for life means imprisonment passed onaconvicted person to serve in the prison till death.
(y) Place of public use means any parts ofabuilding, land, road, railway, waterway or other location that are accessible or open to the public whether periodically, or continuously, for commercial, business, educational, health, religious, cultural, governmental, entertainment and recreational affairs.
(z) Fund includes the followings:
(i) money and properties, assets of every kind and business resources obtained by any means whether tangible or intangible, movable or immovable;
(ii) legal documents or instruments that are the evidence for the money and title to property or profit gained by any electronic or digital means, including bank credits, travellers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts and letter of credit.
(aa) Central Committee means the Central Committee for Counter Terrorism formed by the Union Government under this Law.
(bb) Members of the force means investigation bodies, prevention and suppression forces, financial intelligence unit force and members of special forces which are formed and specified the duties under this Law for investigation, seizure of exhibits, control and taking action upon acts of terrorism, offences of financing of terrorism, terrorist groups and terrorists.
(a) to prevent an act of terrorism against the life and property of human beings and infrastructure facilities and environment;
(b) to protect an act of terrorism by using various means in executive, economic and social sectors of the State;
(c) to prevent and take action by revealing the terrorist groups, terrorists, their activities, instigation and causes of terrorism, and offences of financing of terrorism;
(d) to enable to implement pursuant to the United Nations International Conventions, resolutions of the United Nations Security Council, ASEAN Conventions for counter terrorism in carrying out the prevention and suppression of terrorism;
(e) to maintain world and local peace by cooperating with the State parties of the United Nations, international and regional organizations.
Formation of the Central Committee and Duties and Powers thereof
The Union Government:
(a) shall form the Central Committee for Counter Terrorism consisting of the Union Minister for the Ministry of Home Affairs as Chairman, Ministers from the relevant Ministries, and the responsible persons from the Government departments and organizations as members;
(b) may re-form the Central Committee as may be necessary.
The duties and powers of the Central Committee are as follows:
(a) laying down policies, guidance and plans related to counter terrorism;
(b) forming necessary working committees and bodies, and determining functions and duties, guiding and supervising;
(c) negotiating, guiding and supervising the cooperation of working committees, bodies, the relevant Union Ministries, Government departments and organizations;
(d) adopting necessary measures, for prevention, removal and destruction of weapons of mass destruction which include biological, chemical and nuclear weapons and radioactive materials which encroach international peace, security and stability;
(e) declaring any organization, association or group asaterrorist group and any person asaterrorist, and revocation of such declaration with the approval of the Union Government or under the declaration of the United Nations Security Council;
(f) adopting necessary measures for not enabling to land or take off the aircrafts owned or hired or controlled byaterrorist group oraterrorist within the territory of the State;
(g) coordinating with international and local organizations and State parties of international convention for counter terrorism in accord with the provisions contained in chapter XV of this Law for the suppression and elimination of acts of terrorism;
(h) issuing and refusing the authorization to extradite terrorists mutually with the State parties of international organization, member States of the regional organization in accord with the provisions contained in chapter XVI of this Law;
(i) managing and spending the fund for suppression and elimination of act of terrorism established in accord with the provisions contained in chapter XVIII of this Law;
(j) rewarding members of forces, officials, staff and members of the public who participate in the suppression of acts of terrorism and do so effectively;
(k) adopting necessary measures for effective protection of the safety of informer who informs in advance the attempt of terrorist or terrorist group and the safety of informer and witness in taking action or in prosecution;
(l) issuing the order to freeze the assets and funds owned by such terrorist or terrorist group when it is declared asaterrorist oraterrorist group under sub-section (e);
(m) issuing the prohibition not to be carried out by anyone on financial service and transfer in respect of the assests and fund owned by the terrorist group contained in sub-section (l);
(n) cancelling the order to freeze the assets and funds contained in sub-section (l) when it is revoked from being declared asaterrorist oraterrorist group by the United Nations Security Council and the Central Committee;
(o) safeguarding not to affect the interest of person who carries out in good faith;
(p) guiding and supervising the implementation of the department or force which lays down and implements the functional policy and procedures from sub-sections (l) to (o);
(q) laying down necessary guidance and procedures for not enabling to make formation of taking appearance or use as the way of financing or changing the way or conceal the non-government organizations or non-profit-making organizations with the intent to commit terrorism or to finance terrorism;
(r) guiding and supervising the awareness and capacity building of the relevant working committees, prevention and suppression organizations, government departments, organizations and the public for enabling to reveal and to take action against an act of terrorism;
(s) reporting to the Union Government, from time to time, the performance of the Central Committee in respect of suppression and elimination of an act of terrorism, and performing other duties assigned by the Union Government.
Suppression and Elimination of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation and Airport
Whoever commits unlawfully and intentionally any of the following acts on board an aircraft in service, amounts to an offence against the safety of Civil Aviation and Airport:
(a) the commission of violation of any penal code by any person on board an aircraft;
(b) an act of violence againstaperson on board an aircraft in service to endanger the aircraft;
(c) an act of violence against the safety of the civil aviation;
(d) endangering to the passengers, crew or property on board;
(e) endangering to proper order and discipline on board;
(f) interference, seizure or unlawful control of flight of an aircraft in service byaperson on board by forcing or threatening to endanger the aircraft commander;
(g) attempt, abetment or instigation to commit any act or participation as an accomplice in such commission contained in sub-sections (a) to (f).
Whoever acts unlawfully and intentionally any of the followings, amounts to an offence of unlawful seizures of an aircraft:
(a) seizure of an aircraft or control the flight of an aircraft in service by force or threat or by coercion or by any other means of intimidation or by any other high technology;
(b) using an aircraft in service to cause death or grievous hurt to any person or substantial damage to property or to the environment;
(c) intimidation to commit any unlawful and intentional act against an airport serving civil aviation, or causing any person to accept such possible intimidation under circumstances;
(d) causing death and serious injury to any person or destroying an aircraft by biological, chemical and nuclear weapon, explosives, radioactive or similar device or substance to cause or likely to cause serious damage to infrastructure facilities or State-owned facilities, conveyance, machinery and equipment, using those on that aircraft or dispose of or discard such device or substance from an aircraft in service;
(e) transporting, causing to be transported or facilitating the transport of biological, chemical and neuclear weapon, explosives, radioactive materials contained in sub-section (d) and sources to produce them and softwares related to technology or similar device or substance or material used in designing, producing or giving of biological, chemical and neuclear weapon by aircraft;
(f) attempt, abetment, instigation to commit any act or participation as an accomplice in such act contained in sub-sections (a) to (e).
Whoever commits unlawfully and intentionally any of the following acts in aircraft in service, amounts to an offence against the safety of civil aviation:
(a) an act of violence against any person on board an aircraft an service to endanger the safety of the aircraft;
(b) destroying, jeopardizing an aircraft in service or placing or causing to place on an aircraft any device or substance which is likely to destroy the aircraft to damage or to be incapable of the flight the aircraft or to endanger the aircraft in service;
(c) destroying or damaging air navigation facility systems and communication equipments or interferring its directing operation to endanger the safety of an aircraft in flight;
(d) communicating knowingly false information to endanger the safety of flight;
(e) attempt, abetment, instigation to commit any act or participation as an accomplice in such offence contained in sub-sections (a) to (d).
Whoever commits unlawfully and intentionally any of the following acts, amounts to an unlawful act of violence against airport serving civil aviation:
(a) an act of violence which causes or is likely to cause serious injury or death to any person who is serving civil aviation;
(b) destruction of air navigation facility system and communication equipment of an airport serving civil aviation or aircraft not in service located thereon, or disruption of the services of the airport to endanger or likely to endanger the safety of that airport;
(c) threat or by force against any person who is providing service to do an unlawful act or to refrain from doingalawful act in order to endanger an aircraft in flight or airport serving civil aviation;
(d) attempt, abetment, instigation to commit any act or participation as an accomplice in such act contained in sub-sections (a) to (c).
A commander of an aircraft departed abroad from or landed to any airport of the State, when he has reasonable grounds to believe thataperson has committed, or is about to commit an unlawful act on board, and it is necessary to take immediate action to protect the safety of the aircraft, or of persons and property therein or to maintain discipline on board:
(a) may impose other appropriate measures including restraint on such person to deliver him to the authority of the Police Force or Immigration Department or to disembark him from the aircraft and to require or authorize the assistance of crew members and passengers for such restraint;
(b) shall notify situations on board, as soon as practicable, to the authority of civil aviation before landing the unlawful seizure of the aircraft to the airport in the territory of the State or another State.
(a) The authority of civil aviation of the State shall, when receiving the notice under sub-section (b) of section 11, allow the commander of aircraft registered in the State or another State to disembark such offender who commits an act unlawfully and intentionally.
(b) The aircraft commander may, after landing the aircraft to an airport of the State or another State, deliver the offender who is believed to commit any offence intentionally and unlawfully contained in this chapter as soon as practicable, together with the evidence to the authority of the Police Force or Immigration Department.
(c) The authority of the Police Force or Immigration Department may, after receiving the offender who has committed an act unlawfully and intentionally delivered under sub-section (b), extradite to the respective State in accord with the provisions contained in chapter XVI of this Law.
(d) No suit or criminal proceedings shall lie against the persons in respect of undertakings as may be necessary of the persons who undertake on duty an aircraft in service in accord with the provisions of sub-sections (a), (b) and (c).
When the notice which has reasonable grounds to believe thataperson has committed, or is about to commit an offence on board an aircraft in service unlawfully and intentionally, the Central Committee or Working Committee and the relevant Government Department or Organization delegated by the Central Committee shall arrange the following matters as may be necessary:
(a) enabling to restore control and fly of the aircraft safely in accord with law by the commander;
(b) accepting and allowing the request for landing on any airport of the State and the disembarkation and delivery of the offender who has committed an act unlawfully and intentionally by the aircraft commander;
(c) assigning members of the suppression force for the seizure of the offender who unlawfully and intentionally occupied the aircraft;
(d) enabling crews and passangers to continue their journey.
The provisions relating to aircraft contained in this chapter shall not apply to the aircraft used in the works of military, war affairs, customs and police force.
Prevention of Crimes against Internationally Protected Persons
Whoever commits with the intent of any of the following acts, amounts to an offence against internationally protected persons:
(a)amurder, kidnapping or other commission upon the person or injuring liberty of an internationally protected person;
(b)asevere attack upon the official premises, the private accommodation or means of transport of internationally protected person aiming to endanger in person or liberty;
(c) threat to commit any offence contained in sub sections (a) and (b) ;
(d) attempt, abetment, instigation to commit any offence or participation as an accomplice in such offence contained in sub-sections (a) to (c).
The relevant Working Committee shall adopt measures for prevention, suppression and taking action of crimes against internationally protected persons, cause the members of force to perform and supervise.
Prevention of the Taking of Hostages
(a) seizes or detains any person, and requests any other person or State or international inter-governmental organization or association formed under law or any group of persons to do unlawful act or refrain from doing lawful act and threatens with condition to kill, to injure or to continue to detain the hostage if the request is refused and to release the hostage if it is accepted, amounts to an offence of taking of hostage.
(b) attempt, abetment, instigation to commit any offence or participation as an accomplice in such offence contained in sub-section (a), amounts to such offence.
The relevant Working Committee shall adopt measures for prevention, supression and taking action of the taking of hostage, cause to perform and supervise the members of the force.
Prevention and Suppression of Offences relating to Nuclear Material, Radioactive Material, Nuclear Facility and of Biological, Chemical and Nuclear Weapons
Whoever intentionally commits any of the following acts, amounts to an offence of nuclear material, radioactive material, biological, chemical and nuclear weapon:
(a) receipt, possession, use, making, transfer, alteration, disposal, dispersal or spread of nuclear material, radioactive material, biological, chemical and nuclear weapons in any way to do an unlawful act or to refrain from doingalawful act to any person, organization, international organization or the State or to cause or likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property or environment;
(b)atheft, robbery, misappropriation and forgery of nuclear material, radioactive material, biological, chemical and nuclear weapons;
(c) transporting, sending, or moving of nuclear material, radioactive material, nuclear facility contained in clause (1) of sub-section (p) of section 3, biological, chemical and nuclear weapons into or out of the State without lawful authority;
(d)athreat to commit any offence contained in sub-section (a) and (b) to any person, organization, international organization or the State in order to do an unlawful act or to refrain from doingalawful act;
(e)ademand for nuclear material, radioactive material, nuclear facility, biological, chemical and nuclear weapons by threat or use of force or by any other form of intimidation;
(f) attempt, abetment, instigation to commit any offence or participation as an accomplice in committing such offence contained in sub-sections (a) to (e).
Whoever intentionally commits any act of the following acts, amounts to an offence of nuclear facility:
(a) direction which causes damage to nuclear facilities or operation of such facilities inamanner which releases or risks the release of radioactive materials with the intent to cause or likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to the property or environment without undertaking nuclear facility in the territory of the State in accord with the existing law;
(b)athreat to commit any of the offence contained in sub-section (a);
(c)ademand for nuclear facilities by threat or use of force or by any other form of intimidation;
(d) attempt, abetment or instigation to commit any offence or participation as an accomplice in committing such offence contained in sub-sections (a) to (c).
The relevant Working Committee shall specify the level of protection consistent with the international convention and adopt necessary measures and control in accord with such protection measures in importing, exporting, transporting, storing and producing nuclear materials and technology.
If the relevant Working Committee, during international nuclear transport, does not receive assurances to provide protection measures of type and level specified under section 21 from the carrier or the person who takes responsible to carry nuclear materials, radioactive materials and nuclear facilities contained in clause (i) sub-section (p) of section3shall:
(a) not be exported or authorized to export;
(b) not be imported or authorized to import;
(c) not be allowed the transport in the territory of the State by land, waterway or air or to transit through an airport and seaport of the State.
Whoever intentionally commits any of the following acts, amounts to an offence of import, export, transport and transfer of nuclear material, radioactive material and nuclear facilities contained in clause (1), sub-section (p) of section 3:
(a) import, export, transport by land or waterway or air and transport through or transit the State of nuclear material, radioactive material and nuclear facility contained in clause (1) sub-section (p) of section3inconsistent with protection measures specified under section 21;
(b) transfer of nuclear material, radioactive material and nuclear facilities or nuclear technology not for the protection of radiation risk and peaceful purposes in accord with the international convention.
Whoever unlawfully and intentionally commits any of the following acts, amounts to an offence of nuclear terrorism:
(a) with the intent to cause or likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to the property or environment:
(1)acommission in any way by using the nuclear material, radioactive material or device, or the use, possession or making of any such material;
(2) emission of radioactive material or spread of radiation in any way by using or destroying the nuclear material, radioactive material oradevice and nuclear facility.
(b) use of nuclear material, radioactive material or device and nuclear facility by compelling any person or international organization or the State to do an unlawful act or to refrain from doingalawful act;
(c) attempt, abetment, instigation to any offence or participation as an accomplice in committing such offence contained in sub-sections (a) and (b).
(a) The relevant Working Committee shall coordinate with foreign countries directly or through the International Atomic Energy Agency, as may be necessary, for the following matters in the course of international nuclear transport:
(i) providing protection measures and systems to and protection of nuclear material, radioactive material and nuclear facilities;
(ii) providing protection measures not to cause the offence of nuclear material and to be free from destructions of nuclear facilities;
(iii) managing to mitigate radiation to the minimum feasible extent when the destruction of nuclear facilities occurs;
(iv) recovery of any nuclear material when such material is lost or stolen.
(b) The implementation of the provisions of this law or information received from communication with foreign countries, international organizations and regional organizations or activities of cooperation shall be confidential.
Provisions contained in this chapter shall:
(a) apply to the international transport, domestic transport, storage and use of nuclear materials and nuclear facilities contained in clause (i) of, sub-section (p) of section3for peaceful purposes;
(b) not be constructed that by force or threat to use nuclear material, radioactive material or nuclear facility for peaceful purposes is allowed in accord with law;
(c) not affect the transfer of nuclear material, radioactive material, nuclear facility and nuclear technology in order to enhance the protection pursuant to the international convention for peaceful purposes;
(d) apply to the transport of nuclear material, radioactive material and nuclear facilities contained in clause (i) of sub-section (p) of section3by land, by waterway or by air from any place to or through seaport, airport, border gate or any other place within the territory through international water or airspace;
(e) not affect the rights and responsibilities of each State and individual contained in international law in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations and International Humanitarian Law;
(f) not apply to the activities in armed forces in armed conflicts in accord with the International Humanitarian Law during an armed conflicts and the activities undertaken by military in accord with the rules of International Law;
(g) not apply to the use, hold or maintenance of nuclear material or devices contained in nuclear facility for military purpose.
Whoever unlawfully and intentionally commits any of the following acts or omissions, amounts to an offence against the safety of maritime navigation:
(a) the seizure or control overaship by force or threat or any other form of intimidation;
(b) an act of violence againstaperson on boardaship by the act which is likely to endanger the safe navigation of that ship;
(c) destroyingaship or destroying or causing damage toaship or to its cargo which is likely to endanger the safe navigation of that ship;
(d) placing or causing to be placedadevice or substance which destroys or is likely to destroy onaship to destroy the ship or likely to endanger the safe navigation of that ship or to cause damage to that ship or its cargo;
(e) destroying or causing serious damage to maritime navigational facility system, communication apparatus and services or an act which is likely to endanger the safe navigation ofaship by the serious interference in such facility systems and services;
(f) communication with false information knowingly to endanger the safe navigation ofaship;
(g) using or disposing in any mean the ship or the explosive device, radioactive material, biological, chemical and nuclear weapon or oil, natural gas, other hazardous substance or noxious substance onaship or fromaship in order to cause death or serious injury to any person or to cause damage;
(h) knowingly transport on boardaship of explosive device, radioactive material, biological, chemical and nuclear weapons contained in sub-section (g) and similar materials, other source material, special fissionable material or materials especially designed or prepared for the processing;
(i) the use ofaship to cause death or serious injury toaperson in any mean or to cause serious damage to infrastructure facilities;
(j) transportingaterrorist on boardaship knowing that the person has committed any act of terrorism;
(k)athreat in any mean to commit any offence contained in sub-sections (a) to (j);
(l) causing death or injury to any person in committing or attempting to commit any offence contained in sub-sections (a) to (k);
(m) attempt, abetment, instigation to commit any offence or participation as an accomplice in committing such offence contained in sub-sections (a) to (l).
(a) The relevant Working Committee shall direct the relevant ship owner, port authority and ship industries, masters of ships and port representatives to adopt necessary measures by specifying the level of protection to alert for protection, requesting assistance, suppression and elimination of threats and attack which is likely to endanger ships, ports and facilities provided to facilitate for docking and to exchange information.
(b) Ship industries shall emphasize to comply with the relevant requirements contained in this chapter and the guidance contained in International Ship and Port Facility Security Code.
(c) A master ofaship shall, before dockingaport in the territory of the State or whilst inaport of any state party of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, comply with the requirements specified for the respective level of protection.
(a) The master ofaship may take necessary prevention and suppression to be free from threats and attack which endanger the ships.
(b) The ship industry, charterer or any other person has no right to constrain the power to exercise any decision made by the master ofaship with his experience and practical skill in terrorist navigation including refusal to load cargo, container or other closed cargo to transport if it is necessary to maintain the safety and security of the ship.
(a) The master ofaship may deliveraperson who he has reasonable grounds to believe has committed any act of terrorism contained in this chapter to the authority of the Police Force or Immigration Department of the receiving State together with evidence after informing in advance to and getting the approval from the navigation authority of its registered State or the receiving State.
(b) The authority of the Police Force or Immigration Department receiving the terrorist delivered under sub-section (a) may extradite such terrorist to the respective State in accord with the provisions contained in chapter XVI of this Law.
The provisions contained in this chapter relating to unlawful acts against the safety of maritime navigation shall:
(a) be applied to the ships mentioned in sub section (k) of section 2;
(b) be applied to the offender or the alleged offender contained in section 27 found in the territorial sea of the State.
The provisions contained in this chapter shall not be applied to the following ships:
(a)awarship;
(b)aship owned or operated byaState when being used asanaval auxiliary or for customs or police force purposes;
(c)aship which has been withdrawn from navigation or laid up;
(d) ships owned or operated by the Government and other government ships operated for non-commercial purposes.
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms
Whoever unlawfully and intentionally commits the following acts, amounts to an offence against the safety of fixed platforms:
(a) seizure or control overafixed platform by force or threat or any other form of intimidation;
(b) act of violence againstaperson on boardafixed platform to endanger its safety;
(c) destroying or causing damage toafixed platform to endanger its safety;
(d) placing or causing to be placedadestructive device or substance by any means onafixed platform to destroy it or to endanger its safety;
(e) using or disposing by any meansafixed platform or explosive device, radioactive material, biological, chemical and nuclear weapon; or oil, natural gas, other hazardous device or substance, noxious device or substance on or from the fixed platform to cause death or serious injury to any person or to cause damage;
(f) threatening the public, causing injury or death to any person, with or without condition, to commit any offence contained in sub-sections (a) to (e);
(g) attempt, abetment, instigation to commit any offence or participation as an accomplice in committing such offence contained in sub-sections (a) to (f).
The relevant Working Committee shall adopt measures for prevention, suppression and taking action of any offence contained in section 33 by any person against or from the fixed platform in the territorial sea of the State or in the continental shelf of the State, cause to perform or supervise the members of the force.
Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection and Suppression of the Offence against Unmarked Plastic Explosives
(a) fails to comply with the convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, 1991 and produces, distributes, imports, exports or transports through or docks the unmarked explosives in or out of the territory of the State without permission of the authority, amounts to an offence against plastic explosives;
(b) attempts, abets, instigates to commit any offence or participates as an accomplice in committing such offence contained in sub-section (a), amounts to commission of such offence.
The provisions contained in section 35 shall not apply to the activities on unmarked explosives by the military or police force according to their duty under the supervision of respective administrator with the approval of responsible person authorized by the State.
The relevant Working Committee shall adopt necessary measures for prevention, suppression and taking action of offences against plastic explosives and cause the members of the force to perform and supervise.
The relevant Working Committee and authorities of defence service and responsible person of police force shall:
(a) adopt necessary measures for the destruction of unmarked explosives which have been brought into or manufactured in the State or already existed in arsenal of defence service or police force. Moreover, the possession and transportation of such unmarked explosives shall be restricted and controlled effectively;
(b) as soon as possible, destroy the explosives which are inapplicable to the provisions contained in this Chapter.
Suppression of Offences of Terrorist Bombing
Whoever unlawfully commits any of the following acts with the intent to cause death or serious injury, or to cause extensive destruction or to cause major economic loss, amounts to an offence of terrorist bombing:
(a) delivery, placing, disposing or detonation of an explosive material inaplace of public use, in any State-owned facility, conveyance, machinery and equipment, any public transport system or in any infrastructure facility or destruction thereof;
(b) attempt, abetment, instigation to commit an offence or participation as an accomplice in such offence contained in sub-section (a).
(c) production, distribution, sale, gift or possession of explosive material, bomb or arms to commit terrorist bombing or to abet in the commission of terrorist bombing.
The relevant Working Committee shall adopt necessary measures for prevention, suppression and taking action of offences of terrorist bombing, cause to perform and supervise the members of the force.
Suppression of Offences of Financing of Terrorism
Whoever, in committing or to commit an act of terrorism, acts any of the followings to support or to facilitate such offence, amounts to an offence of financing to terrorism;
(a) collecting or receiving or supporting or sending or transferring unlawfully the funds by any means with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, directly or indirectly which is gained lawfully or unlawfully or both, by any territorist or any territorist group.
(b) using or possessing unlawfully of money, assets or service by any means with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, directly or indirectly, by any terrorist or terrorist group.
(c) concealing, moving abroad or tansfering to other’s name the asset knowingly or with reasons to know that it is stored or maintained or controlled byaterrorist group oraterrorist or any other person on behalf of them.
(d) attempt, abetment, instigation, organizing, providing, directing others to commit any offence or participation as an accomplice in committing any such offence contained in sub-sections (a), (b) and (c).
Whoever acts, knowingly or with reasons to know, any of the followings, amounts to an offence of financing of terrorism:
(a) transaction or transfer in any means, directly or indirectly, of an asset owned by any terrorist group or any terrorist;
(b) involving in or facilitating, directly or indirectly, any transaction of an asset owned byaterrorist group oraterrorist;
(c) providing financial service or other related services involving an asset ofaterrorist group oraterrorist, for the benefit of or under the direction ofaterrorist group;
(d) possessing or keeping knowingly an asset which is owned byaterrorist group oraterrorist under his control;
(e) failing to reveal the information without proper reasons to the Central Committee and relevant working committee, or any member of force in respect of transaction and transfer in any other means of an asset owned byaterrorist group andaterrorist;
(f) failing to report the existence ofaterrorist and, money and assets owned byaterrorist group, communication or it is believed to be communicated with them;
(a) Whoever transacts or transfers by any means or attempts to transfer an asset owned byaterrorist group oraterrorist or fails to reveal the information in respect of such act without proper reason to the Central Committee and relevant working committee or any member of the force, amounts to an offence of financing of terrorism.
(b) No suit or criminal proceeding shall lie against any person who reveals the information in good faith relating to an asset owned byaterrorist group oraterrorist under sub-section (a).
Notwithstanding any act of terrorism does not occur or is not attempted to commit or collected fund is not actually used in committing an act of terrorism or collected or provided fund is not connected with any act of terrorism in respect of any offence contained in this chapter, it shall be deemed an offence is committed. In this sense, the intention to commit or the commission of an act of terrorism in any State or territory, or the existence ofaterrorist group oraterrorist together with or separately from any offender who commits any offence contained in this chapter withinaState oraterritory, or in different States or territoroies shall not be considered.
The relevant Working Committee shall adopt necessary measures for prevention, suppression and taking action of offences of financing of terrorism, cause to perform and supervise the members of the force.
The Central Committee may issue any of the following orders, or delegate the power to issue any such order to the relevant Working Committee:
(a) prohibition order and sealed order in order not to convert, transfer, obliterate and conceal assets seized as exhibit in respect of any offence of financing of terrorism and revocation thereof;
(b) order issued to the responsible persons of the respective bank and financial institutions, if money, assets and benefits ordered to seize as exhibits are deposited at any bank and financial institutions, to allow searching those exhibits, inspecting and copying of the relevant records and, if necessary, allow to seize as exhibits.
The relevant Working Committee:
(a) shall guide and supervise investigation bodies or prevention and suppression forces to take necessary investigation, inspection and measures not for reaching the funds and assets of non-government organizations or non profit organizations to terrorist groups and terrorists, not to be organized by terrorists and terrorist groups by assuming as such organizations, not to be used as the channel of financing of terrorist and terrorist groups.
(b) shall form the necessary inspection bodies and assign them or the members of prevention and suppression forces or of financial intelligent force for controlling money and assets ofaterrorist, money, assets and funds ofaterrorist group, investigating the offences of financing of terrorism and acts of terrorism, seizing and controlling the exhibits and litigating.
(c) shall coordinate with relevant government departments and organizations for controlling not to organize and carry out bank and finicial institutions and business organizations by using the organizations providing to commit an act of terrorism or money and assets obtained from the commission of any act of terrorism.
(d) shall instruct, as may be necessary, the members of the force to prosecute the offenders of financing of terrorism or the exihibit money and assets to the relevant court for trial.
(e) may issue order to cut, restrict, intercept the electronic communication of terrorists groups and terrorists with the approval of the Central Committee if it is necessary to prevent acts of terrorism which cause danger to the State and the public suddenly.
The members of the force assigned under this law, in performing their duties, may exercise the provisions contained in the Code of Criminal Procedures, if it is not contrary to the rules, procedures issued under this Law.
Whoever commits any of the following acts shall, on conviction, be punished with imprisonment foraterm fromaminimum of 10 years toamaximum of imprisonment for life or death sentence:
(a) acts contained in clauses (xi) and (xii) of sub-section (b) of section 3;
(b) an offence committed on board an aircraft in service, contained in section 7;
(c) an unlawful seizure of an aircraft contained in section 8;
(d) an unlawful act with the intent against the safety of civil aviation contained in section 9;
(e) an unlawful act of violence at an airport serving international civil aviation contained in section 10.
Whoever commits any of the following acts shall, on conviction, be punished with imprisonment foraterm fromaminimum of 10 years toamaximum of imprisonment for life and shall also be liable to fine:
(a) acts contained in clauses (x), (xiii) and (xiv) of sub-section (b)of section 3;
(b) taking of hostage contained in section 17;
(c) an offence of nuclear material, other radioactive material, biological, chemical and nuclear weapon contained in section 19;
(d) an offence of nuclear facility contained in section 20;
(e) an offence of import, export, transport and transfer of nuclear material, radioactive material contained in section 23 and nuclear facilities contained in clause (i) of sub-section (p) of section 3;
(f) an offence of nuclear terrorism;
(g) an unlawful act with the intent against the safety of maritime navigation contained in section 27;
(h) an unlawful act with the intent against the safety of fixed platform contained in section 33;
(i) an offence of terrorist bombing contained in sub-sections (a) and (b) of section 39;
(j) an offence of financing of terrorism contained in sections 41 and sub-section (a) to (d) of section 42.
Whoever commits any of the following acts shall, on conviction, be punished with imprisonment foraterm fromaminimum of5years toamaximum of 10 years and shall also be liable toafine:
(a) an offence against internationally protected persons contained in section 15;
(b) an offence against plastic explosive contained in section 35.
(c) production, distribution, sale, gift or possession of explosive material, bomb or arm to commit terrorist bombing or to abet in the commission of terrorist bombing contained in sub-section (c) of section 39.
Whoever commits any of the following acts shall, on conviction, be punished with imprisonment foraterm fromaminimum of3years toamaximum of7years and shall also be liable to fine:
(a) an act contained in clauses (xvi) to (xviii) of sub-section (b) of section 3;
(b) an offence of financing of terrorism contained in sub-sections (e) and (f) of section 42;
(c) failure to reval the information contained in sub-section (a) of section 43 without proper reasons.
Whoever violates any prohibition of rules issued under this law shall, on conviction, be punished with imprisonment foraterm fromaminimum of one year toamaximum of3years and shall also be liable toafine:
Whoever, in committing any offence under sections 49, 50 and 51, causes death or serious injury to any person or persons shall be punished with imprisonment foraterm fromaminimum of 10 years toamaximum of imprisonment for life or death sentence.
Whoever convicted any offence of terrorism shall, if he having been convicted of any offence of terrorism before, be punished with the maximum punishment provided for such subsequent offence.
The court shall pass an order of confiscation or disposal in accord with the stipulations on money and assets seized as exhibit, if it is punished with an offence of financing of terrorism.
The Central Committee and the relevant Working Committees shall cooperate and coordinate with international organizations and regional organizations or State Parties of International Convention on Counter Terrorism for adopting appropriate measures including the following matters:
(a) exchange of information on an act of terrorism;
(b) prevention of terrorism upon other State and citizens byaterrorist by using his territory;
(c) prevention of instructing, preparing, managing and financing relating to an act of terrorism;
(d) enhancing the cooperation of the control of border area to prevent the transnational or transboundary movement of terrorists and terrorist groups;
(e) training, technical cooperation and capacity building on the suppression of an act of terrorism;
(f) carrying out activities of educating on counter terrorism;
(g) cooperation to establish the central information department in the region;
(h) cooperation for capacity building in the suppression of an act of terrorism in accord with the international standards;
(j) cooperation in research and development activities on the suppression of acts of terrorism;
International mutual assistance may be carried out with the State Parties of International Convention and member States of regional organizations for suppression of acts of terrorism in accord with the existing Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Law.
In respect of the extradition ofaterrorist:
(a) any offence of an act of terrorism or financing of terrorism contained in this Law shall be deemed as an extraditable offence and extradite in accord with the existing law.
(b) it shall be carried out with reference to other stipulations prescribed by the law of the requested State to extradite according to the provisions of extradition prescribed in the international conventions on counter terrorism.
(c) the relevant working committees and government departments and organizations shall, under the guidance of the Central Committee, cause to carry out the extradition and accept extradition in accord with the stipulation as may be necessary.
In respect of the request from any State Party of International Convention on Counter Terrorism or any member State of regional organization for mutual assistance in criminal matters and extradition of an offender who committed any offence of terrorism contained in this Law in the territory of the State:
(a) acts of terrorism covered under this law shall not be deemed asapolitical offence, an offence connected with it or an offence inspired by political motives;
(b) such request shall not be refused on the sole ground that it concerns withapolitical offence or an offence connected with it or an offence inspired by political motives.
Fair Treatment in Taking Action
Any person shall, in performing the investigation and taking action for acts of terrorism under this law, be guaranteed the fair treatment and enjoyment of other entitled rights in accord with the stipulations in conformity with the International Human Rights Law.
Any person shall, if he has been alleged and taken into custody of an act of terrorism, have the right to inform without delay to the nearest appropriate embassy, consulate or representative of the State of which that person isanational for entitlement of his right.
Fund for the Prevention and Suppression of an Act of Terrorism
The Central Committee shall establish the fund for the prevention and suppression of an act of terrorism with the following income and assets:
(a) subsidy from the Union budget in accord with the existing law;
(b) provided fund not less than 10 percent of the money paid by the relevant Region or State government to its budget under the serial number9of Schedule5of the Constitution in respect of the offences contained in this Law;
(c) cash and kind donated by domestic and foreign well-wishers.
The Central Committee may allow to use and expend the fund for the prevention and suppression of an act of terrorism for the following purposes:
(a) expenses required in performing functions and duties of the Central Committee and function and duties of the Working Committees;
(b) matters of adopting necessary measures for prevention and suppression of an act of terrorism:
(c) matters of investigation and taking action against acts of terrorism;
(d) appropriate aids for victims of an act of terrorism;
(e) matters on reforming conviction and rehabilitation of terrorists;
(f) matters of cooperation with international organizations, regional organizations and foreign States in respect of acts of terrorism;
(g) expenses in performing other necessary matters and other emergency duties specified by the Central Committee.
If any person who is not under investigation in respect of money and assets connected with an offence of an act of terrorism or financing of terrorism can prove that he has obtained such money and any asset by giving consideration in good faith and possessed it by any means of transfer, the right of such person shall not be affected.
The Central Committee shall, in respect of seeking asylum as refugee under human right if it is found that the asylum seeker has committed an act of or abeted, instigated or conspired to commit that act of terrorism after scrutinizing carefully whether or not he did so, take proper action upon him under this law.
If the exhibit relating to any act of terrorism prosecuted under this Law is not easily producible before the court, andareport or relevant documentary evidence of how such exhibit is kept in custody may be submitted and such exhibit needs not be produced before the court. Such submission shall be deemed as if it wereasubmission of the exhibit before the Court and the relevant Court shall pass an administrative order in accord with Law.
The Ministry of Home Affairs shall organize the necessary staff office and appoint the staff to enable to assist in performing the functions and duties of the Central Committee, Working Committees and bodies formed under this Law.
Notwithstanding anything contained in any existing law, acts of terrorism shall be taken action only under this Law.
In prosecuting against any act of terrorism, it shall obtain the prior sanction of the Central Committee or the Body delegated by the Central Committee.
No prosecution shall lie in any court against any person or any member of any organization assigned to perform any function and duty contained in this Law for the performance thereof in good faith.
In implementing the provisions contained in this Law:
(a) the Ministry of Home affairs may, with the approval of Union Government, issue the necessary rules, regulations and bye-laws;
(b) the Central Committee and the relevant Union Ministries may issue the necessary notifications, orders, directives and procedures;
(c) the Working Committee may, with the approval of Central Committee, issue the necessary orders and directives.
I hereby sign under the Constitution of the Republic of the Union.
အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ အား download ချရန် အောက်ပါ link အား နှိပ်ပါရန်
“အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ”| ဥပဒေအမှတ် ၂၃/၂၀၁၄ |
Previous ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ
Next ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ